YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, October 25
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရားစွဲ ဦးမြတ်ခိုင်ကတောင်းပန်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/25/20110အကြံပြုခြင်း
မြင်သာ ကညန ရုံးအနီး တက္ကစီ တစ်စီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (မြင်သာ) အနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ယနေ့ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်ဝန်းကျင်က တောင်ဥက္ကလာ ဘေလီတံတာဘက်မှ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေးဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသော တိုယိုတာ ကိုရိုလာ အမျိုးအစား အငှားယာဉ် တက္ကစီတစ်စီး၏ ကားရှေ့ခန်း ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ အောက်မှ အမျိုးအမည် မသိရှိရသေးသော ပေါက်ကွဲမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ အသက် ၂၅ ဝန်းကျင်ခန့် အမျိုးသားတစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး ခေါင်းခန်းတွင် လိုက်ပါလာသူ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် အမျိုးသား တစ်ဦးမှာ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Burmese youth leaders seeking release of political prisoners to visit Ottawa, Toronto and Vancouver
OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - Oct. 24, 2011) - The Canadian Union of Public Employees, Canadian Friends of Burma and CUSO-VSO are sponsoringavisit to Canada by two young Burmese leaders – Mi Aie Son, who works with the Mon Youth Progressive Organization and Aung Naing Soe, General Secretary of Nationalities Youth Forum. They will visit Canada over the next two weeks. (Bios attached.)
The youth leader/activists are calling for the Burmese government to:
4. Begin an authentic dialogue with Aung San Suu Kyi and promote dialogue with democratic and ethnic forces to stop the root causes of current problems.
5. There are still over 2000 political prisoners in Burmese prisons living under extremely inhumane conditions. Growing up in Burma today leaves young Burmese subjected to human rights violations, especially in the armed conflict areas where there are increasing attacks by the Burmese army on ethnic groups.
Mi Aie Son, Mon Youth Progressive Organization
Aung Naing Soe, General Secretary, Nationalities Youth Forum
Centre Hub (POD152)
CUPE, Canadian Friends of Burma and CUSO-VSO are also launchingapostcard campaign to increase pressure on the Burmese regime to release all political prisoners (see attached). Mi Aie Son and Aung Naing Soe will visit with the Parliamentary Friends of Burma, civil society and Human Rights organizations, university and youth groups in Ottawa and Toronto before participating in the CUPE National Convention in Vancouver.
Mi Aie Son
Mi Aie Son is an ethnic Mon from Burma. She wasaMon language teacher in Burma where teaching your first language is forbidden. Mi joined the Mon Youth Progressive Organization in 2003 as part of the Burma Democracy movement. MYPO operates along the Thai-Burma border.
In 2004 Mi was able to participate in the Altsean-Burma internship program that gave her the opportunity to build her skills and knowledge – an opportunity for education that she never had in Burma. She graduated in 2007 from the Foreign Affairs Training program conducted by the Foreign Affairs committee Team (FACT) in cooperation with the National Council of the Union of Burma.
During the 2007 'Saffron revolution', Mi led the campaign to distribute letters, pamphlets and DVDs about the crackdown by Burmese authorities on peaceful demonstrators. Many were arrested, beaten, tortured and killed. In 2008, they launched another campaign to raise awareness about the Burmese dictatorship's attempt at gaining legitimacy by adoptinga'constitution'.
Mi was chosen in 2009 to serve as chairperson and deputy director of programs for MYPO. Mi is working in cooperation with Mon Women's Organization's (MWO) onaWomen and Child rights project, implementing workshops and training for rural women. Responsibilities involve project monitoring and training young activists to work with allied organizations.
In order to support the democracy struggle, MYPO has implemented capacity building programs for members,awomen's Empowerment Program, awareness training on issues around land use and hydro dams, rights based education and campaigns, and the production of regular bulletins.
Aung has worked for over 13 years on human rights issues and youth empowerment on the Thai-Burma border. Since 2008 Aung has been the General Secretary of the Nationalities Youth Forum (NY Forum)amulti-ethnic youth umbrella organization representing thirteen different groups and eleven ethnicities from Burma. Aung is responsible for the overall running of the organization, including strategy, reporting, donor networking, administration and financing. The organization implements internship programs, provides training on human rights, the concept of democracy, federalism, ethnic issues and politics. NY Forum promotes regional and international networking with partners concerned with youth empowerment and indigenous rights.
Aung Naing Soe is an Arakan ethnic and worked as an assistant medical practicioner and student at the Mae Tao clinic in Mae Sot, Thailand from 2000-2001. He then became the office manager for the Arakan Liberation Party from 2002-2003 and also studied advanced English. In 2005 he was elected as the Arakan Youth Network Group General Secretary, responsible for coordinating activities inside of Burma, promoting/training non-violent action, community organization and human rights violation documentation.
Besides primary health care, nursing and English language education, Aung attended the Foreign Affairs Training School in Chiang Mai, Thailand and obtained an International Relations Certificate.
The Burma Postcard is available at the following address: http://media3.marketwire.com/docs/Burma_Postcard_ENG.pdf
Web Link: http://www.marketwire.com/printer_friendly?id=1577041
25 Oct 2011 Yeyintnge's Diary
ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေက လွှတ်​တော်ထဲမှာ လိမ်လည်​နေတယ်
Published on October 25, 2011 by ရွှေအောင်
လယ်သမား ​တွေနဲ့​ ကုမ္ပဏီကြီး​တွေ ပူး​ပေါင်း​လုပ်​ဆောင်ရာမှာ လယ်သမား​တွေ လယ်ယာ​မြေဆုံး​ရှုံး​နေကြရတာကို ထိန်း​သိမ်း​ ကြီး​ကြပ်​ပေး​ဖို့​၊​ လယ်သမား​တွေရဲ့​ လယ်ယာ​မြေ​တွေကို ကုမ္ပဏီ​တွေက သိမ်း​ယူခွင့်​မရှိ​စေ​ရေး​အဆိုကို တနင်္လာ​နေ့​က ပြုလုပ်တဲ့​ အမျိုး​သား​လွှတ်​တော် အစည်း​အ​ဝေး​က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ​ဒေသကြီး​ အမျိုး​သား​လွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ် ဦး​ဆွေ​အောင်က ဒဂုံမြို့​သစ် မြို့​နယ် သုံး​ခုအတွင်း​မှာ လယ်သမား​တွေရဲ့​ လယ်​တွေကို ကုမ္ပဏီ​တွေက သိမ်း​ယူထား​တဲ့​အ​ပေါ် ပြန်လည် ကြီး​ကြပ်သုံး​သပ်​ပေး​ဖို့​ တင်ပြခဲ့​တဲ့​အဆိုကို လယ်ဆည် ဒု- ဝန်ကြီး​ ဦး​ခင်​ဇော်က ပြန်လည်ရှင်း​လင်း​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပါတယ်။
လယ်ဆည် ဒု-ဝန်ကြီး​ရဲ့​ ရှင်း​လင်း​တင်ပြချက်​တွေအရ လယ်ယာ​မြေ​တွေဟာ မြို့​ပြဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​အတွက် လယ်ယာ​မြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်​ရေး​ ဥပ​ဒေအရ လွန်ခဲ့​တဲ့​ နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာကတည်း​က သိမ်း​ခဲ့​တဲ့​ လယ်​တွေဖြစ်ပြီး​ မြို့​ပြဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ မလုပ်နိုင်လို့​ ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုက​နေ အထူး​ လယ်ယာစိုက်ပျိုး​ရေး​ဇုန်​တွေလုပ်တဲ့​ ကိစ္စလည်း​ဖြစ်တယ်။ ဒါ​ကြောင့်​ လယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်​ ဆုံး​ရှုံး​ခြင်း​ကိစ္စနဲ့​ မဆိုင်ဘူး​ဆိုပြီး​ လွှတ်​တော်ဥက္ကဋ္ဌက ပယ်ချခဲ့​ပါတယ်။
ဒဂုံမြို့​သစ် သုံး​မြို့​နယ်တွင်း​က လယ်ဧက​ပေါင်း​ ​ခြောက်​သောင်း​ကျော်ကို မြို့​ပြဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ ပြုလုပ်ဖို့​ဆိုပြီး​ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က သိမ်း​ယူခဲ့​တာပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စိုက်ပျိုး​ရေး​ အထူး​ဇုန်လုပ်ဖို့​အတွက် ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုကို လယ်ဧကတ​သောင်း​လောက် လုပ်ကွက်ချထား​ပေး​ခဲ့​တာပါ။
အခု​တော့​ လွှတ်​တော်က ဒီကိစ္စဟာ လယ်သိမ်း​တဲ့​ကိစ္စမဟုတ်ဘူး​ဆိုပြီး​ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ဒဂုံမြို့​သစ် ​နေ လယ်သိမ်း​ခံရတဲ့​ လယ်သမား​တွေအ​ရေး​ လိုက်လံ ​ဆောင်ရွက်​ပေး​နေတဲ့​ ​ရှေ့​နေ ကိုဖိုး​ဖြူက​တော့​ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေက လွှတ်​တော်ထဲမှာ လိမ်လည်​နေတယ်လို့​ တုံ့​ပြန်​ပြောကြား​လိုက်ပါတယ်။
ရှေ့​နေ ကိုဖိုး​ဖြူကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ချက်။
မ ​နေ့​က လွှတ်​တော်မှာ လယ်ဆည် ဒုဝန်ကြီး​က ဒဂုံမြို့​သစ် သုံး​မြို့​နယ်မှာ သိမ်း​ထား​တဲ့​ လယ်​တွေက ရန်ကုန်တိုင်း​ ​ဒေသကြီး​ကလည်း​ ​လျော်​ကြေး​တွေ​ပေး​ပြီး​ပြီ။ ဒီလယ်​တွေက စီမံကိန်း​ဝင် လယ်​တွေ​ပေါ့​။ ကုမ္ပဏီ​တွေက လုပ်တဲ့​သူလည်း​ရှိတယ်၊​ မလုပ်တဲ့​သူလည်း​ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ ပြန်​ပေး​ဖို့​အ​ကြောင်း​မရှိဘူး​လို့​ ​ပြောလိုက်ပြီ။ အဲဒါနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ ကိုဖိုး​ဖြူတို့​ လယ်သမား​အ​ရေး​ လုပ်တဲ့​သူ​တွေအ​နေနဲ့​ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
“ပထမဆုံး​ ပြောချင်တာ​တော့​ တစ်အချက်က တရား​မျှတမှု လုံး​ဝကင်း​မဲ့​နေတယ်လို့​ ​ပြောချင်ပါတယ်။ ဒုတိယတချက်က​တော့​ ဥပ​ဒေနဲ့​ လုံး​ဝညီညွတ်ခြင်း​မရှိပါဘူး​လို့​ ​ပြောချင်ပါတယ်။ ​နောက်တချက်က​တော့​ အ​ကြောင်း​အချင်း​အရာ တင်ပြချက်​တွေက မမှန်ကန်ပါဘူး​လို့​ ကျ​နော်​ပြောချင်ပါတယ်။ အဲ​တော့​ ပထမဆုံး​အချက်အ​နေနဲ့​ ကျ​နော်​ပြောချင်တယ်။
“တရား​မျှတမှု လုံး​ဝမရှိဘူး​ဆိုတာက အစိုး​ရမြို့​ပြအိမ်ရာ၊​ အစိုး​ရရုံး​စိုက်ရာ​နေရာမှာ မြို့​ပြအိမ်ရာပြုလုပ်ဖို့​အတွက် ဒီလယ်​မြေ​တွေကို (လန- ၃၉) နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်တဲ့​ ဥပ​ဒေ ၃၉ အရ ဒါ​တွေကို သတ်မှတ်လိုက်တာ။ တကယ်တမ်း​ကျ​တော့​ ဒီ​ပေါ်မှာ​ဆောက်လုပ်မယ့်​ဟာကို ​နေပြည်​တော်မှာပဲ ​ဆောက်လုပ်ဖြစ်သွား​တယ်။ ဒီလယ်​မြေ​တွေဟာ လန-၃၉ လုပ်ထား​တယ်ဆိုတဲ့​ ​နေရာ​တွေဟာ တစ်အချက် ​တောင်သူလယ်သမား​တွေ စိုက်ပျိုး​နေတဲ့​နေရာ​တွေဖြစ်တယ်။ အဲ​တော့​ တကယ်တမ်း​ အစိုးရ အိမ်ရာလုပ်မှာလည်း​ မဟုတ်ဘဲနဲ့​ လုပ်ဖို့​အတွက်လည်း​ အစီအစဉ်မရှိ​တော့​ဘူး​မှန်း​ သိလျက်နဲ့​ ဒါကြီး​ကို အိုး​အိမ်က ဆက်ယူထားတယ်။ ​နောက်တခါ ယခင်တိုင်း​မှူး​က​နေ ဆက်လက်ယူထား​ပြီး​တော့​ ဒါကိုနိုင်ငံ​တော်က စိုက်ပျိုး​ရေး​စီမံကိန်း​ ​နေရာလုပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကို​ပေး​လိုက်ပါတယ်ဆိုတာ ​တောင်သူ​တွေလက်ငုပ်လုပ်​နေမှန်း​ကို သိလျက်နဲ့​ ကုမ္ပဏီ​တွေလုပ်ခွင့်​ရ​အောင် လုပ်​ပေး​လိုက်တာက​တော့​ မျှတမှုလုံး​ဝမရှိပါဘူး​။
“ဒုတိယအချက်က​ တော့​ ဥပ​ဒေနဲ့​လုံး​ဝ မညီညွတ်တဲ့​ကိစ္စကို ​ပြောပါမယ်။ မူလ​တောင်သူ​တွေဆီက ပဋိညာဉ်ခံပြီး​၊​ အာမခံပြီး​ ​နောက်ပြီး​တော့​ စာချုပ်စာတမ်း​နဲ့​မဟုတ်​တောင် စာချုပ်စာတမ်း​ဥပ​ဒေအရ အာဏာသက်ဝင်သကဲ့​သို့​ ပဋိညာဉ်ဥပ​ဒေအရ အာဏာသက်ဝင်သကဲ့​သို့​ ကမ်း​လှမ်း​ချက်​တွေရှိတယ်။ အဲဒါက အကျိုး​တူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့​ကမ်း​လှမ်း​ချက်​တွေရှိတယ်။ တ​ယောက်နဲ့​တ​ယောက် အတူတူ လုပ်ကြမယ်။ လိုအပ်တဲ့​ စွမ်း​အား​စု​တွေကုမ္ပဏီက ဖြည့်​ပေး​မယ်။ ​တောင်သူလယ်သမား​တွေက အကျိုး​တွေကို ခံစား​ရမယ်ဆိုတာမျိုး​ကို ပဋိညာဉ်လုပ်ပြီး​ ဒီလိုပဋိညာဉ်ကမ်း​လှမ်း​ချက်ကို သ​ဘောတူလို့​သာလျှင် ​တောင်သူလယ်သမား​တွေကလည်း​ သ​ဘောတူခဲ့​ပြီး​ တဲ​တွေဖယ်​ပေး​တယ်၊​ ​ရွှေ့​ပေး​တယ်။ အတူတူ တကယ်လုပ်လည်း​လုပ်​ရော ရှုံး​တယ်ဆိုပြီ​တော့​ ​တောင်သူကို မဖြစ်စ​လောက်​ငွေ​ကြေး​လေး​ပေး​ပြီး​ နှင်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဒါက​တော့​ ဥပ​ဒေနဲ့​လုံး​ဝမညီညွတ်တဲ့​ကိစ္စ။
“တတိယ တချက်က​တော့​ အချက်အလက်လွှဲမှား​တာ​တွေ။ ဘယ်ကုမ္ပဏီမှ အပြည့်​မစိုက်နိုင်ဘူး​။ ဘယ်ကုမ္ပဏီမှလည်း​ စပါး​တင်း​တွေကို ​တောင်သူလယ်သမား​တွေ ထွက်သလိုထွက်​အောင် စိုက်ပျိုး​နိုင်တာမျိုး​ကိုလည်း​ မလုပ်နိုင်ဘူး​။ တကယ့်​နည်း​ပညာ​တွေလည်း​ ​ရောက်လာတာမျိုး​ မရှိသလို တကယ့်​စိုက်ပျိုး​တဲ့​ အတတ်ပညာနဲ့​ ပတ်သက်လို့​လည်း​ ဘာမှမရှိဘူး​။ ကုမ္ပဏီ​တွေ​ရောက်လာတဲ့​အတွက် လယ်ယာ​မြေ​တွေဟာ ဓာတုဓာတ်​မြေဩဇာ သုံး​လို့​ လယ်​မြေပျက်စီး​တာပဲ ရှိတယ်။ ​တောင်သူ​တွေထမင်း​ငတ်သွား​တယ်။ အလုပ်လက်မဲ့​တွေဖြစ်သွား​တယ်။ လယ်ငှား​လုပ်သား​တွေ အလုပ်လက်မဲ့​တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ မိသား​စု​တွေ ဘဝ​တွေဒုက္ခ​ရောက်ကုန်တယ်။ ဖွံ့​ဖြိုး​လာတယ်။ တိုး​တက်လာတယ်ဆိုတဲ့​ လယ်ဆည်ဒုဝန်ကြီး​က လွှတ်​တော်မှာ ​ဖြေရှင်း​သွား​တဲ့​အချက်ဟာ မှား​ယွင်း​ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့​ ပြည်သူတရပ်လုံး​ကို ကျ​နော်​ပြောချင်ပါတယ်။ ​တောင်သူလယ်သမား​ထု တရပ်လုံး​ကို ​ပြောချင်ပါတယ်။ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေက လွှတ်​တော်မှာ လိမ်လည်​နေတယ်။ ကျ​နော်တို့​ပြည်သူ​တွေက သတင်း​စာ​တွေက​နေ အညံ့​ခံ​နေလို့​မရဘူး​။ ကိုယ့်​အား​ကိုယ်ကိုး​ပြီး​တော့​ ဝိုင်း​ချရ​တော့​မယ်၊​ ကိုယ့်​ဟာကို ကြိုး​စား​ရ​တော့​မယ်။ ရုန်း​ကန်ရ​တော့​မယ်။ ကိုယ့်​ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီး​ရ​တော့​မယ့်​အချိန်ကို ​ရောက်​နေပြီလို့​ ကျ​နော်​ပြောချင်ပါတယ်။”
သူတို့ ​ရဲ့​ဖြေရှင်း​ချက်ထဲမှာဘာပါသလဲဆို​တော့​ လယ်သမား​တွေအတွက်လည်း​ လယ်ယာ​မြေနဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ ဥပ​ဒေ​တွေ ပြဋ္ဌာန်း​ဖို့​ ပြင်ဆင်​ရေး​ဆွဲ​နေပါတယ်​ပေါ့​။ ဒီ​တောင်သူလယ်သမား​ အကျိုး​အတွက် တကယ်ရှိသင့်​တဲ့​ လယ်ယာ​မြေဥပ​ဒေ​တွေက ဘယ်လိုမျိုး​ အခုချိန်မှာ ရှိ​နေသင့်​ပြီဆိုတာလဲ ​ပြောပြ​ပေး​ပါဦး​။
“​ တောင်သူလယ်သမား​တွေမှာ ဥပ​ဒေမဲ့​လယ်ယာလက်လွတ် ဆုံး​ရှုံး​နေရတဲ့​ ကိစ္စရပ်​တွေကို ​ပြေလည်​အောင် ​ဖြေရှင်း​ပေး​နိုင်မယ့်​ ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရလည်း​ ​ဖြေရှင်း​ရမယ်။ သင့်​တင့်​လျောက်ပတ်တဲ့​ လုပ်ထုံး​လုပ်နည်း​တွေကို ပြဋ္ဌာန်း​ပေး​နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေ​ပေါ်​ပေါက်ဖို့​ လိုအပ်​နေပါတယ်။”
ကိုဖိုး ​ဖြူက လယ်သမား​အ​ရေး​ ​ဆောင်ရွက်​နေတဲ့​သူဆို​တော့​ လယ်သမား​တွေနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ အဲဒီကိစ္စကို ဆက်ပြီး​ဘယ်လို​ဆောင်ရွက်သွား​မလဲ။ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်​ဖြေရှင်း​သွား​မယ်ဆိုတာကို ​ပြောပြ​ပေး​ပါခင်ဗျ။
“ကုမ္ပဏီ​ ပေါင်း​မြောက်မြား​စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိပါတယ်။ အာဏာပိုင်နဲ့​ လက်ဝါး​ရိုက်ပြီး​တော့​ ​တောင်သူ​တွေဆီက​နေ ဥပ​ဒေမဲ့​ တရား​လက်လွတ် ဒီလိုသိမ်း​ယူတဲ့​ ကုမ္ပဏီ​ပေါင်း​ ​မြောက်မြား​စွာရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း​လုံး​ ခံစား​နေကြရတယ်။ ​ပြော​တော့​ စက်မှု​ဒေသဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ ဆိုတဲ့​ကိစ္စမျိုး​ကို ​ပြောတယ်။ တကယ်တမ်း​ ဥပ​ဒေ​တွေလည်း​ဖွံ့​ဖြိုး​တာမဟုတ်ဘူး​။ စက်မှု​တွေလည်း​ ဖွံ့​ဖြိုး​တာမဟုတ်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေမျိုး​တွေ ကြုံ​တွေ့​နေရတယ်။ လယ်ယာ​မြေ​တွေကို ဥပ​ဒေမဲ့​ လက်လွတ်ဆုံး​ရှုံး​ခြင်း​တွေ မဖြစ်​ပေါ်ရ​အောင် မူဝါဒအရကို ပြည်​ထောင်စုလွှတ်​တော်က​နေ အကာအကွယ်​ပေး​နိုင်တဲ့​ ဥပ​ဒေပြဋ္ဌာန်း​ချက်မျိုး​တွေ ဖြစ်​ပေါ်လာ​အောင် မူအရကို ကာကွယ်​ပေး​လာနိုင်​အောင် ကျ​နော်တို့​ ဆက်လက်ကြိုး​စား​ရပါဦး​မယ်။ ကြိုး​စား​မှသာလျှင် နိုင်ငံတဝန်း​လုံး​မှာရှိတဲ့​ ပြည်သူတရပ်လုံး။ ​တောင်သူလယ်သမား​ထုတရပ်လုံး​ကို အကာအကွယ်​ပေး​နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
ချိုကျိုးနွားလား ဒွန်းစဏ္ဍားနဲ့ ခေတ်သစ် လောက်ဖျားများ
လောက်ဖျားဆိုလို့ မွန်ရာဇဝင်လာ မြောင်းမြစား လောက်ဖျားအကြောင်း ပြောမလို့ မဟုတ်ပါ။ သစ္စာဖောက် လောက် ကောင်လို့ တင်စားခဲ့ရတဲ့ လောက်တွေတောင် ကြားရင်ဖြုံသွား၊ ဖျားသွားလောက်တဲ့ ကျုပ်တို့ တော်လှန်ရေးထဲက ဖောက်ပြန်နိုင်လွန်း၊ စားဝါးနိုင်လွန်း၊ ကိုယ်မှီခိုရာကို ကိုယ် ဖျက်ဆီးနိုင်လွန်းတဲ့ လောက်ဖျားတွေအကြောင်း ပြောမလို့ပါ။
ဗမာစကားမှာ “ငါးပိနဲ့ လောက်၊ စိန်နဲ့ ကျောက်” လို့ ဆိုရိုးစကားတခုရှိတယ်။ အကောင်းထဲမှာ အဆိုး၊ အဆိုးထဲမှာ အ ကောင်းရှိတတ်တာကို ရည်ညွန်းပြီး ဆိုတာပါ။ အဆိုးနဲ့အကောင်း ဒွန်တွဲရှိတတ်တဲ့ လောကဓမ္မ သဘာဝကို ဖော်ပြတာ လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
ငါးပိဆိုတာကတော့ မြေပြန့်နေ ဗမာတိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ခံတွင်းမိန် စားဖွယ်အာဟာရ ပါပဲ။ အဲ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ငါးပိထဲမှာ စက်ဆုတ်ရွံရှာ မသတီဖွယ်ရာလောက်တွေ ပေါက်ဖွား ကိန်းအောင်းနေလေ့ရှိတယ်။ ဇီ ဝဗေဒသဘောအရတော့ လောက်လန်းဆိုတာ အတောင်ပါ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ယင်လို ပျားလို အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေရဲ့ သန္ဓေ သားလောင်းတွေ။ ဒီလောက်လန်းတွေဟာ ငါးပိအပြင် သစ်သီးသစ်ဥတို့၊ မစင် အညစ်အကြေး၊ အပုပ်အစပ်များ၊ သတ္တဝါ အသေကောင်တွေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကတဆင့် ဝင်ရောက်ပြီး သက်ရှင်နေတဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာ မှီခိုကြီး ပွားကြတယ်။
ဒီလောက်တွေရဲ့ သဘာဝကိုက သူတို့ မှီခိုကျင်လည်ရာကို စားသောက်ဖျက်ဆီးပြီး ရှင်သန်ကြရတယ်။ လောက်တွေဟာ ခိုလှုံရာ အဆောက်အဦရဲ့ အတွင်းကျကျ အချက်အချာတွေမှာ စွဲမှီတတ်တော့ တော်ရုံနဲ့တော့ မထင်သာ မမြင်သာပေ ဘူး။ ထင်သာမြင်သာ ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီခန္ဓာ၊ အဲဒီသတ္တဝါ အတော်အခြေအနေဆိုးသွားပြီ။ ဒီတော့ လောက်တွယ် ရင်ပဲ အဲဒီသတ္တဝါ သေမယ်သာ ပြင်ပေတော့။
ကျုပ်တို့ စစ်အာဏာရှင် ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်ရေး၊ တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ အပုပ်နံ့တထောင်း ထောင်းနဲ့ ငါး ပိအိုးကြီးလည်း အနှစ် (၂၀) ကြာ အတွင်းကြိတ် လှိုက်စားလာခဲ့တာ အခုတော့ ကိုယ်မှီခိုရာကိုဖျက်တဲ့ မသတီစရာ လောက်ကောင်တွေ ဖုံးဖိမရ ပေါ်လာကြပြီ။ တချို့လောက်ကောင်တွေဆို ကြောက်ခမန်းလိလိ အစွယ်ပြူးပြူးနဲ့ အမွှေး တွေတောင် ထောင်ထလို့။ တော်လှန်ရေးရဲ့ ထိပ်တန်းနေရာတွေမှာ အနှစ် (၂၀) ကျော် မှိန်းနေပြီး ရသမျှအခွင့်အရေး တွေကို သုံးစားကြီးထွားလာကြတာပေါ့။ ဒီတော့ တော်လှန်ရေး ဒီရေ ရှေ့မရောက် နောက်ပြန်လျှောကျတာ အဆန်းတ ကြယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်တို့ကိုယ်ကလည်း ညံ့ပါတယ်။ တံဆိပ်ကောင်းတာနဲ့ ခေါင်းဆောင်တင်မိတာကိုး။ ကုလားဖြူ စကားလည်းတတ်၊ နာမည်လည်းကျော်တယ်ဆို တကယ်တော်တယ် ထင်မိတာပဲ။ ပစ္စည်းကောင်းဖို့မလို ကြော်ငြာ ကောင်းရင် နာမည်ကျော် လူကြိုက်များနိုင်တာ အနှစ် (၂၀) ကြာမှပဲ သိတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့အဖြစ်က အရပ် ပျက်တွေနဲ့ ဇာတ်ထွက်ခဲ့သလို၊ အခုတော့ ပြည်တည်မရ ဇာတ်ပျက်ခဲ့ပြီ။
အနှီ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာ တော်လှန်ရေး ဒီရေမြင့်စဉ်ကတော့ မိုးအောက်မြေပြင်မှာ သူတို့အပြင် မရှိသလောက် ရဲရဲ တောက် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေ့ါ။ အခုတော့ အချိန်ကလည်းကြာ တဘက်မှာကလည်း စစ်ကျွန်ခလောက်နဲ့ အမတ် လောက်တော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလေးတွေလည်း မြင်လာ၊ တခြားတဘက်မှာလည်း ဗမာပြည်ထဲ ဝင်ချင်လွန်းလှဖြစ် နေတဲ့ အန်ဂျီအိုတွေရဲ့ ငွေထုတ်တွေကိုလည်း မြင်လာတော့ တချို့က ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း၊ တချို့က မသိမသာ၊ တ ချို့က ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ စစ်ကျွန်ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံလာကြပြီ။ စစ်မိစ္ဆာတွေကို မျက်နှာချိုသွေးနေကြပြီ။ “ချို ကျိုးနွားလား ဒွန်းစဏ္ဍား” လို စစ်ဖိနပ်ကို လျှာနဲ့ လျက်ကုန်ကြပြီ။
အဲဒီအထဲက ပြည်တွင်းမှာ လုပ်နေရတဲ့ လူတွေကတော့ ထားပါတော့။ သူ့အခြေအနေနဲ့သူ ကိုယ်လည်းမသိနိုင်တဲ့ အခြေ အနေ။ ဒါပေမယ့် အော့နှလုံးနာစရာ ကောင်းတာကတော့ ပြည်ပက ဆရာကြီးတွေ၊ လူတတ်တွေနဲ့ သတင်းသမားတချို့ ပါပဲ။ သူတို့ခင်ဗျာ တလျှောက်လုံး ခံစားလာတဲ့ လေယာဉ်ပျံလေး စီးလိုက်၊ အစည်းအဝေးလေး တက်လိုက်၊ ဝီစကီလေး စုပ်လိုက်၊ ချီးလေး ကိုက်လိုက်၊ အလံရှူးသတင်းသမားတွေနဲ့ ပင်းပြီး နိုင်ငံရေးဟောကိန်းတွေ ထင်မြင်ချက်တွေပေး လိုက်နဲ့ ယစ်နေတဲ့ စည်းစိမ်လေးတွေ လက်လွတ် မခံနိုင်တာနဲ့ဘဲ အထက်ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ လေသံအတိုင်း ဒီမို ကရေစီ သင်းကွပ်မဲ့ စစ်ကျွန်ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံအားပေးလာကြတာပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှပဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံရေးလိုလို အထဲက စစ်ကျွန် ကူလီခေါင်း မောင်စူးစမ်းတို့ သခင်တင်မြတို့ရဲ့လေကို အပြင်မှာ တာဝန်ခံဖြန့်ကြတယ်။
အကောင်ကြီးမို့ အထင်အရှားဆုံးက ဟန်ညောင်ရွှေပါ။ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသား စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က စားဖား အချောင် သမားလို့ ထိပ်ဆုံးမှာ စာရင်းတင်ထားပါတယ်။ သွားလေသူ သမ္မတကြီးကို အားတုံ့အားနာ ၀န္ဒနာလို့ ညောင်ရွှေဆိုတာ ဖြတ်ပြီး “ဟန်” လို့ပဲ သုံးချင်ပါတယ်။ ဟန်ဆိုတာ ရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်ထဲက ပြည်ပရောက်ပြီး မိဘဂုဏ်သရေကို အသုံး ချပြီး အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှာ လှုပ်ရှားလုပ်စားခဲ့သူပါ။ လူဖြူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အသွေးလည်းရှိလို့ အများက မျှော်လင့်အားကိုးခဲ့ရသူပါ။ သို့သော် စေတနာကောင်း မကောင်းကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ၊ သံသယဖြစ်စရာ သက်သေအများကြီးပါ။ တဖွဲ့မချောင် တဖွဲ့ထောင်နဲ့ အခုနောက်ဆုံး ဥရောပ EBO အဖွဲ့ပါ။
ဟိုတုန်းကတော့ ဗမာပြည်ပြဿနာ အဖြေရှာဖို့ဆိုတာ သုံးပွင့်ဆိုင်မှ သုံးပွင့်ဆိုင်၊ သုံးပွင့်မဆိုင်ရင် လူနည်းစု တိုင်းရင်း သားတွေမှာ ဘဝနစ်နာ ဆုံးရှုံးရချေရဲ့လို့ ပြင်းထန်တဲ့ သဘောထားတွေနဲ့ လက်ရှိဗမာပြည် ပြဿနာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြဿ နာလို့ ပြောခဲ့ပြီးကာမှ အခုတော့ စစ်ကျွန်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ၊ စစ်ကျွန်ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပကတိအခြေအနေမှန်လို့ မြင်ပြီးသကာလ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ ဝင်ရမည်လို့ ဆိုလာ ပြန်ပြီ။
ဒီလောက် ရှေ့စကား၊ နောက်စကား ဖီလာတရားတွေ ဘယ်လိုကြောင့် ပေါ်လာသလဲ။ အခွင့်အရေးကြောင့်လား၊ နေရာ ကြောင့်လား၊ အထက်ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ အမိန့်ကြောင့်လား၊ ဘာကြောင့် ပြောင်းသွားသလဲ စဉ်းစားရ အတော်ခက် လှ တယ်။ အခုကိုပဲ နိုင်ငံတကာ ကူငွေတွေနဲ့ ဟန်တို့ အစီအစဉ်အတိုင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲပညာပေး ဟောပြောပွဲတွေ၊ သင်တန်းတွေ စလုပ်နေပြီ ကြားရတယ်။ အတွင်းအပြင်က ချိုကျိုးနွားလား ဒွန်းစဏ္ဍားတွေ ချိတ်ဆက် မိနေကြပြီ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ နအဖ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ကော ဘယ်လောက်ထိ နားလည်မူယူထားတယ် ဆိုတာ ဟာလည်း ဆက်စဉ်းစားရမယ့်အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ဟာEBO နာမည်နဲ့ ဗမာပြည်သူတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေရဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ယူရိုငွေတွေ ကို ဆယ်နှစ်ကျော် တကိုယ်တော် ထင်ရာကြဲခဲ့သူပါ။ အခုတော့ အပုပ်နံ့တထောင်းထောင်းနဲ့ လူပြောသူ ပြောများလာလို့ ဆယ်နှစ်စာ အစီရင်ခံစာတခု ထွက်လာပါတယ်။ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇာတ်တွေနဲ့ စီရင်ထားတဲ့ အစီရင် ခံစာထဲမှာတောင် မတော်မတရား အလွဲသုံး စားမှုတွေ၊ မရိုးသားမှုတွေက ဘူးပေါ်သလို ပေါ်နေတုန်းပဲ။
သူ့အစီရင်ခံစာအတိုင်းဆိုရင် ဒီအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံတွေက ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် နိုင်လှ တယ်။ ၁၉၉၇ မှာ ဒီအဖွဲ့ကို ကနေဒါက အဖွဲ့လေးတခုကို အခြေခံဖွဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဟန် ဟာ NCGUB လို့ခေါ်တဲ့ နဂုတ်မှာ အကြံပေးလုပ်နေပြီး NCUB နကပ်မှာလည်း လုပ်နေချိန်ပေါ့။ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေ ရှိနေပြီးသား၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပါနေပြီးသား အခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာ အလှူငွေတွေကို ဗမာပြည်ကိုယ်စားပြု လက်ခံအသုံးပြု မယ့် ဒီ EBO အဖွဲ့က မထင်မရှား ကနေဒါက အဖွဲ့လေးကို အခြေခံဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာ တော်တော်စဉ်းစားရကျပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဆိုတာ သက်ဆိုင်သူ ကာယကံရှင်တွေသာ သိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ အဲဒီအဖွဲ့ကို ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘယ်လိုဖွဲ့တယ်ဆိုတာ သိသာရှင်းလင်းခြင်း မရှိတာဘဲ။ ဗမာပြည်သူတွေ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် ရည်စူးတဲ့ နိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေရဲ့ ငွေကို လက်ခံသုံးစွဲမယ့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပေါ်ပေါက် လာပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံက ခါးပိုက်နှိုက် ဂိုဏ်းလိုလို၊ စောရဖောက်ထွင်းဂိုဏ်းလိုလို ပါပဲ။
အလှူငွေ ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာ ပြုန်းတီးသွားခဲ့ရပေမယ့် ဗမာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ၊ လုပ်နိုင် ခဲ့တာ ဘာတခုမှ လောက်လောက်လားလား ပြစရာမရှိပါဘူး။ အရေးတော်ပုံနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ နှုတ်ပိတ်ခေါင်းညိတ်တွေ ကို ဝန်ထမ်းခန့်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မတန်တဆ လုပ်ခလစာတွေပေးနဲ့ ခိုးခြင်း (၂၅) ပါးနဲ့အညီ စောရဇာတ်ထုတ်ခင်းလာ လိုက်တာ (၁၀) နှစ်ကျော်ကြာလာ တော့ မျိုးဖျက်မိစ္ဆာ နအဖ သန်းရွှေတို့ရဲ့ ရာသက်ပန် စစ်အာဏာရှင် တည်မြဲရေးလုပ် ငန်းတွေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ထောက်ခံလာတဲ့အထိ အတင့်ရဲလာတယ်။
သူ့အစီရင်ခံစာထဲက ကိုယ့်အနီးက ဒေလီအီးယူရုံးဆိုတာ ၂၀၀၄ လောက်ကမှ စဖွင့်တယ်။ နှုတ်ပိတ်ခေါင်းညိတ် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ဖွဲ့တယ်။ ABSL စည်းရုံးတည်ဆောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဂွင်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့ အစည်းတွေကြားမှာပဲ မရိုးမသား ထိုးဖောက် ချဉ်းကပ်ပြီး စားရင်တင် ဓာတ်ပုံရိုက် နှမ်းဖြူးပြီး ကိုယ်လုပ်သလိုလို ဟိတ်ထုတ်တယ်။ အစီရင်ခံ စာထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဒေလီအီးယူရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များဆိုတာ အဲဒါပါပဲ။ ငွေအမြောက်အမြား ဖြုန်းတီးခဲ့ ပေမယ့် ABSL တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးထက် ထူးကဲသာလွန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒီနေ့ အိန္ဒိယ ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်းစုများရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်လောက်အထိ သန်သန်မာမာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ABSL ရဲ့ ထိုးဖောက်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားဂွင်ထဲမှာပဲ တဝဲလည်လည် လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်တယ်။
တခြားမြင်မိတဲ့ EBO ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်ကစလို့ နအဖစစ်အုပ်စုအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဆန့် ကျင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံရေး (မသိမသာ) ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ညီလာခံတွေကို ဥရောပမှာ အသွင်တူ ပုလင်းတူဗူး ဆို့ အမြီးပြတ်တွေ၊ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်းတို့၊ ဒေါက်တာဇာနည်တို့၊ နေဝင်းမောင်တို့လို နအဖ အလိုတော်ရိတွေနဲ့ တ ခြိမ်းခြိမ်း ပွဲခံခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဒူးထောက်ရေးလမ်းစဉ်ကို နယ်စပ်အခြေစိုက်အဖွဲ့ အစည်းတွေကပဲ ထောက်ခံနေသ ယောင် မျက်လှည့်ပြဖို့ ခေါင်းဆောင်တချို့ကို ဖဲ့စည်းရုံးတယ်။ စစ်ကျွန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသား လူ မျိုးများကောင်စီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အတွင်းရေးမှုးတို့ တယောက်က ဆန့်ကျင်၊ တယောက်က ကန့်ကွက်နဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင် ကြေ ငြာချက်တွေ ထုတ်ခဲ့ကြတာကို မှတ်မိကြအုံးမှာပါ။ ဒါဟာ ဟန်ရဲ့ လုပ်စားရိုက်ချက်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ စာလုံးပါတဲ့ စာတစောင် မိရင်တောင် ထောင်အနှစ် (၂၀) ကြမ်းခင်း ဈေးပေါက်နေချိန်မှာ ခင်ဇော်ဝင်း၊ ဇာနည်တို့ နေဝင်းမောင်တို့လိုလူတွေ ပြည်ပကို ဝင်ချီထွက်ချီ လုပ်နေနိုင်တာ၊ ဟန်တို့လို ပြည်ပအတိုက်ခံ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေနဲ့ ဒူးတိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညီလာခံနိုင်နေတာဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ သဘောထားကြီးမှုလည်း မဟုတ် သလို၊ ညံ့ဖျင်းမှုလည်း မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ နောက်ပိုသေချာတာကတော့ ဟန်တို့ နေဝင်းမောင်တို့ လုပ်သမျှကို စစ်မိစ္ဆာတွေက သဘောကျ အားရတယ်ဆိုတာ ပါပဲ။
ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း၊ လက်ခံလိုခြင်း လက်မခံလိုခြင်း၊ ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းများနဲ့ ဒွန်တွဲနေတဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ ကိုယ့်သီလ ကိုယ် စိတ်ချယုံကြည်သူတွေမှ ရဲရဲရှုမြင်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်းအမှုတွေကို တတ်နိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန် ခြင်းနဲ့ ရဲရင့်ခြင်းဆိုတာ တိုက်ရိုက်အချိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ ရဲရင့်မှုက မှန်ကန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသလို၊ မှန်ကန်ခြင်းက ယုံကြည်မှုနဲ့ ရဲရင့်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ မှန်ကန်မှ ရဲရင့်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မယုံတဲ့သူဟာ ဘယ်အခါမှ တခြားသူကို မယုံဘူး။ တိုင်းသူ ပြည်သား ကိုလည်း မယုံဘူး။ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူယုံကြည်တဲ့ ကိစ္စကို တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ပြောရဲရမယ်၊ ရှင်းပြရဲရမယ်၊ ရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ အသက်စွန့်သင့်တယ်ထင်တဲ့ နေရာမယ် စွန့်ရမယ်၊ ပရိယာယ်သုံးသင့်တဲ့ နေရာမယ် သုံးရမယ်၊ ဘယ် ကိစ္စမဆို လုပ်ရင်မှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ ရာဇဝင်က ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အခု ဟန်တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကတော့ မမှန်လို့ မရဲလေသလား၊ မရဲလို့ မမှန် လေသလားမသိ။ ခိုး ကြောင်ခိုးဝှက် နိုင်လွန်းလှတယ်။
ဒီလောက်ဖောက်ပြန်တဲ့ ဟန်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အများတကာ ခေါင်းဆောင်အမည်ခံတို့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေနိုင် ကြတာကို အစီရင်ခံပါ (၂၀၀) ကျော် စာရင်းပေါက်တဲ့ ဟန်ရဲ့ လက်ဝေခံ အဖွဲ့အစည်းစာရင်းကိုတွေ့မှ သဘောပေါက်မိတယ်။ အသံ မထွက်နိုင်တဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပါးစပ်ပေါက်မှာ ရှိနေပြီကိုး။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့ရဲ့ ပြည်ပတော်လှန်ရေး၊ နယ်ခြားတော်လှန်ရေး နှစ် (၂၀) ခရီးဆိုတာလည်း အထက်မှာပြောခဲ့သလို လောက်ကျပျက်စ်ီး ဇာတ်ပျက်ခဲ့ပြီ။ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတတ်တဲ့ တပ် ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သူခိုး နွားကောင်းမသိ ဉာဉ်ဆိုးကြောင့် အသက်အသွေးချွေးများနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ကျုပ်တို့ တော်လှန်ရေးကြီး ဂုဏ်သရေညစ်နွမ်း ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပြီ။
တောသား တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တော့ နွားဆိုတာ အဖိုးတန်ရတနာတပါးပါပဲ။တောသားမှန်ရင် နွားကောင်း နွားဆိုး ခွဲခြားတတ်တယ်။ နွားကောင်းကို တန်ဘိုးထားတတ်တယ်။သူခိုးဆိုတာကတော့ နွားမြင်ရင် အသားပဲထင်တယ်။ အဆိုးအကောင်းမသိ စားဖို့ပဲသိ၊ တန်ဘိုးမထားဖြစ်တာ သဘာဝပေါ့။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာ နွားနဲ့ သပိတ်ထဲက ညိုမြအပြောနဲ့ “မျိုးချစ် စိတ်ရှိကြောင်း ဟစ်ကြ၏၊ ညီညာမှ ပြည်သာမည်ဟု အော်ကြ၏၊ ဤသို့ ပြောဆို ကြွေးကြော် ဟစ်အော်သူတို့အား မြင့်မြတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟု ထင်စရာအကြောင်းရှိသော်လည်း အများအားဖြင့် စဖြီး များသာ ဖြစ်ကုန်၏။” လို့ ဆိုရမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့။
ဟန်ရဲ့လက်ဝေခံ အဖွဲ့အစည်းစာရင်းအရ ကြားတောင်မကြားမိဘူးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ ထိပ် တန်းအဖွဲ့ အစည်းကြီးတွေလည်း ပါနေတာတွေ့ရတယ်။ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့ ရောမအင်ပါယာရှင် ဂျုးလီးယက်ဆီဇာ ရဲ့ သေခါနီးစကားကိုပဲ သံယောင် ရေရွတ်နိုင်ပါတော့တယ်။
ဆီဇာက “သြော် ဘရုတပ် မင်းလည်း ပါသကိုး (Et tu, Brute) တဲ့။ ”
စာကြွင်း… ဘရုတပ်ဆိုတာ ဂျူးလီးယက်ဆီဇာအား ပုန်ကန်သူ မြို့စားတဦးကို တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူ အသက်ကယ်ပြီး ဆီး နိတ်တာအထိ ချီးမြှောက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူတယောက်ပါ။ ဂျူးလီးယက်ဆီဇာက အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခံထားရပြီး လုပ်ကြံမူမှာ ဘရုတပ် ကိုယ်တိုင်ပါနေတာကို သိတဲ့အချိန်မှာ ဆီဇာက တအံ့တသြနဲ့ အထက်ပါအတိုင်း ရေရွက်ပြီးတော့ သေဆုံး သွားခဲ့ရပါတယ်။
မှတ်ချက် … EBO အစီရင်ခံစာအား ရယူလိုသူများအား မျှဝေနိုင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါမည်။
Kyi Maung Than (1963 – 2011)
ကဗျာဆရာ လှသန်း (၁၉၆၃ – ၂၀၁၁)
တာရာဝေယံ၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၁
မြန်မာစစ်အစုိုးရ အဆက်ဆက်အောက်မှာ ကလောင်အမည်အမျိူးမျိူးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ပိတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် ကဗျာရေးသားခြင်းကို မစွန့်လွှတ်တဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုလှသန်း (၄၉ နှစ်) ဟာ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၂ ည ၉ နာရီ ၂၀ က ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ကျောက်ကပ်ရောဂါဆောင်မှာ ကွန်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
“မနေ့ညနေက လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဆေးရုံရှေ့ထွက်ထိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတယ်။ ဒီတခါတော့ သေပြီ ထင်တာ၊ အခုလိုဆိုရင် မသေတော့ဘူးကွာ။ လာတဲ့သူတွေက အရမ်းများတော့ ငါလည်း စိတ်ရှုပ်တယ်ကွာ။ ဒီညနေ အမဲအူပြုတ်နဲ့ ထမင်းစားဦးမယ်ကွာ” လို့ဆိုပြီး ကိုလှသန်းက ပြောခဲ့တယ်လို့ ကဗျာဆရာ မိုဃ်းဇော်က ပြောပြပါတယ်။
“ဒီတခေါက် ဆေးရုံတင်တာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ဆိုတော့ တပတ်လောက် ရှိပြီပေါ့။ မနေ့ညနေကတော့ အကောင်းပဲ။ မနေ့ညပိုင်းက စ ဖောက်သွားတာ။ ကျောက်ကပ် ၂ ခုစလုံး အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ အဆုပ်ထဲမှာလည်း ရေတွေပြည့်နေတယ်။ ဆီးလည်း မသွားနိုင်တော့ သွေးအဆိပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောတယ်။ ရက်ပိုင်းပဲ ခံတော့မယ်တဲ့” လို့ ကိုလှသန်းရဲ့ မိသားစုဝင်တဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကိုလှသန်းဟာ ၁၉ ၈၇၊ ၁၉ ၉ ၉ ၊ ၂၀၁၁ မတ် ကာလတွေမှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ ဆေးရုံ ၃ကြိမ် တက်ခဲ့ရပါတယ်။ ယခုအကြိမ်ဟာ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ ၄ ကြိမ်မြောက် ဆေးရုံတက်ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကဗျာဆရာလှသန်းဟာ ၁၉ ၉ ၀ ခုနှစ်တုန်းက ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDFနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် ၃ နှစ် ကျော် နေခဲ့ရပါတယ်။
ကိုလှသန်းဟာ ရန်ကုန်ဇာတိဖြစ်ပြီး မွေးချင်း ၈ ယောက်အနက် ဒုတိယသားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်က စပြီး စာဖတ်၊ သီချင်းနားထောင်၊ ပန်းချီဆွဲ၊ ဂစ်တာတီးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းတို့ကို အရသာတွေ့ခဲ့တယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအမျိူးမျိုး ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် ကဗျာဖတ်ခြင်း၊ ကဗျာရေးခြင်းကို ဘ၀ရဲ့ တသက်တာအလုပ်အဖြစ် ခံယူထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ စာသင်ပြသူတဦနဲ့ နှစ်ဦသဘောတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၂ မိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမှာ ပါတဲ့ “ဆူးလေရဲ့ ရာဇ၀င်” ကဗျာဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပုံနှိပ်ကဗျာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၄ နိုဝင်ဘာ ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းက “ဖြောင်ချက်” ကဗျာကို အဲသည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့ တနှစ်တာအကြိုက်ဆုံးကဗျာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
“လက်” (၁၉၉၈ သြဂုတ်လ ရနံသစ်မဂ္ဂဇင်း) ကဗျာက ၁၉၉၈ မန္တလေးစာဖတ်သူများရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကဗျာဆု (နောင်တွင် ထန်းရိပ်ညိုကဗျာဆု) ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“အနေအထိုင် မတတ်မှုများ” (၁၉၉၉ ဇူလိုင်၊ ရနံသစ်) ကဗျာက ပြင်ဦးလွင်လူငယ်တွေ နှစ်သက်တဲ့အတွက် ငွေ ၃ သောင်း ဂုဏ်ပြုမှုကို မ၈္ဂဇင်းတိုက်ကတဆင့် ပေးပို့ ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။
“တောင်အမေရိကကို သွားချင်တယ်” (၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာ ရနံသစ်) ကဗျာက ၂၀၀၆ ခုနှစ် ပျဉ်းမနား အလယ်ရိုးမကဗျာဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
“အာရှတိုက်ရဲ့ တနေရာ” (၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာ နှလုံးအိမ်မဂ္ဂဇင်း) ကဗျာနဲ့ ၂၀၀၆ ရွှေအမြုတေ ကဗျာဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ငါလည်း တနေ့” (၂၀၀၆ အောက်တိုဘာ မဟေသီ) ကဗျာနဲ့ ရွှေဘိုမြို့ ပန်းကဗျာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ဒီပင်္ဂရ” (၂၀၀၈ မေ၊ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း) ကဗျာဟာ မိစ္ဆာနဲ့ သစ္စာဖောက်တွေ အတောင်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဒီပဲရင်းမြို့ဝန်းကျင်က သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ကဗျာဖတ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခတ်ပြီး စာပေစိစစ်ရေးက နောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
“ကဗျာ ၁၀၀ နှင့် ကဗျာဆရာကွယ်လွန်ခြင်း” ကဗျာစာအုပ်ကို “ကြည်မောင်သန်း” အမည်နဲ့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမှာ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်စာအုပ်နဲ့ တော်ဘုရားကလေး စာပေဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ မတ်လ ၂၁ ကမ္ဘာကဗျာနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၂၀၁၀ မန္တလေးခေတ်ပေါ်ကဗျာဆု (ဒုတိယအကြိမ်) အတွက် တနှစ်တာအတွင်း အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာဆရာအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကဗျာဆရာ လှသန်း ဆိုတဲ့ အမည်ကို စာပေစိစစ်ရေးပ ပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကြည်မောင်သန်း၊ နမိတ်ထွန်း၊ စံသိုက်၊ လိပ်ပြာသန့်သန့်၊ ရန်မခ၊ မောင်သီးသန့် စတဲ့ ကလောင်ပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ လူထုအတွက် ကဗျာတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရေးသားခဲ့ပြီး …
“ကဗျာတွေ ရှင်ချင်ရင် ကဗျာဆရာတွေ သေဖို့သာပြင်လို့ အရင်ကရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ သေဖို့ အသင့်ပြင်ထားရင်း ရှင်မယ့်ကဗျာတွေ ရေးဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ မကွယ်လွန်မီ ညနေက ကဗျာဆရာ ဆေးရုံပေါ်က ရုပ်ပုံ)
By Alwan Moe Sat (Face book မှ)
ယနေ့ အင်တာနက်မှာ အထူး လူသိများတဲ့2နှစ်သမီး အရွယ် တရုတ်ပြည် နယ်တောင်ပိုင်း Foshan, Guangdong province က Weng Yue လေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ နံနက်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ် ။အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း ဘင်ကား2ကြိမ်ကြိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခလေးမလေး Weng Yue ဟာ လူ 18 ယောက်ရဲ့ ဥပေက္ခာပြုခြင်းကို သွေးအိုင်ထဲမှာ လူပ်ရှားရင်းငိုကြွေးရင်း နဲ့ ကားကြိတ်ခံရပြီး တစ်ပတ်တိတိမှာ အစာအိမ်သွေးလွန် ခြင်းနဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများ ပျက်စီး ခြင်း စတဲ့ အဓိကအကြောင်းရာတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
အထက်ပါ မှတ်တမ်းကတော်တော်များများသိပြီး ၊ ကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ယွီယွီ လေးဟာ ဗင်ကား2စီးတိတိအကြိတ်ခံရပေမယ့် အသက်မသေဆုံးသေးပဲ သွေအိုင်ထဲမှာ လူးလိမ့်အော်ဟစ်နေခဲ့ရပေမယ့် လူတွေရဲ့ 18 ကြိမ်တိတိ ရှောင်ခွာသွားမှု့တွေကြောင့် အရွယ်နဲ့မမျှတဲ့ ဝေဒနာများနဲ့အတူ အသက်စွန်သွားခဲ့ရပါတယ် ။
အလုပ်သမား မိဘနှစ်ပါးကနေ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ထိုခလေးမ ယွီယွီ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကမ္ဘာက လူသားတွေ တောက်တစ်ခေါက်ခေါက် ၊ စုတ်တစ်သတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ထို ဗွီဒီယိုကို ကုန်မာပစ္စည်းဆိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာမှတဆင့် ကမ္ဘာသိအောင် အင်တာနက်ကနေ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ တရုတ်လူ့အသိုင်းဝိုင်းကို " ဘယ်လို ယာဉ်ကျေးမှု့ ၊ ဘယ်လို မေတ္တာတရား ၊ဘယ်လိုလှု့ဘောင်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသလဲ " ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ မေးမြန်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါပြီ ။
စိတ်ယဉ်ကျေးမှု ချွတ်ခြုံကျ ဆင်းရဲနေသော စီးပွားဖွံ့ဖြိုးသည့် တိုင်းပြည်
Tuesday, 25 October 2011 04:30 လှရွှေ
... ဒါပေမယ့် တရုတ်အစိုးရ အပါအ၀င် တရုတ် အရင်းရှင် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အဓိက ဆက်ဆံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေ အတွက်တော့ (moral collapse) စိတ်ယဉ်ကျေးမှု ချွတ်ခြုံကျ ဆင်းရဲနေတဲ့ တရုတ်နဂါးကြီးကို အထူး သတိထားစရာလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကျနော် ငယ်ငယ်က အဖေဟာ အိပ်ရာဝင်ခါနီး ပုံပြင် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဖေပြောတဲ့ ပုံပြင်တွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓ၀င် နိပါတ်တော်တွေ ပါသလို ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ပုံပြင်လေးတွေလည်း ပါလေ့ ရှိပါတယ်။ ခုထိ မမေ့နိုင်သေးတဲ့ ပုံပြင်တပုဒ် ကတော့ “ဂေါ်တူဂရိတ်နိုင်ငံ” ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်လေးတခုပါ။
ဂေါ်တူကရိတ်နိုင်ငံဆိုတာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အတွင်းမှာ တည်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ လူတွေ နေထိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ကာလ ကြာလာတဲ့အခါ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမှု ပျောက်သွားပြီး စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးသွားတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်အထိ ပျက်စီးသလဲဆိုရင် ဘုရားရှေ့မှာ အပေါ့အပါးနှင့် ဆီမီး ပူဇော် ထားခဲ့ပြီး မနက်မိုးလင်းလို့ သွားကြည့်ရင် မီးပူဇော်တဲ့ ဆီမီးခွက်ထဲမှာ ရွှေငွေတွေ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွှေငွေတွေ ရလိုတဲ့အတွက် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား အကုန်လုံး မီးပူဇော်ကြတယ်၊ အဲဒီလို ကိုယ်ကျိုးကြည့်ပြီး ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမှု ပျက်လာတဲ့ အတွက် နဂါးကြီးက ကျွန်းရှိလူတွေကို ရေနှစ် သတ်ခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ပုံပြင်ရဲ့ ဆိုလိုချင်တဲ့ အနှစ်သာရ ကတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးသွားတဲ့ အတွက် တိုင်းပြည် ပျက်ရကြောင်းကို ပုံဖေါ်လိုပုံ ရပါတယ်။
လူမှုကွက်ယက်ပေါ်က လူသား ၄ ဒသမ ၄ သန်းရဲ့ မှတ်ချက်
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဖူရှန် မြို့ဈေးအတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ၂ နှစ် သမီးလေး ယူယူ( Yue Yue) ကို ဗန်ကားတစီးက ရုတ်တရက် တိုက်မိပါတယ်။ ကားတိုက်မိပြီး ကလေး မြေပေါ်ကို လဲကျသွားပါတယ်။ ကားဒရိုင်ဘာလည်း ကား တိုက်မိတာကို သိတဲ့အတွက် ရုတ်တရက် ကားကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်း လောက်မှာ ကားဒရိုင်ဘာဟာ ကားအောက်ကို ရောက်နေတဲ့ ကလေးကို မြင်လျက်နဲ့ နောက်ဘီးနှင့် တက်နင်းသွားတာကို ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ချက်တွေမှာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကုန်တင်ကား အသေးလေး တစ်စီးက ကလေးရဲ့ အောက်ပိုင်းကို တက်ကြိတ် သွားပြန်တယ်။ ၇ မိနစ်အတွင်း လူ ၁၈ ယောက်ဟာ ကားတိုက်ခံရပြီး တစာစာ အော်နေတဲ့ ကလေးအနား ဖြတ်သွားကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ကယ်မယ့်လူ မရှိဘူး။ ၁၉ ယောက်မြောက် အဖွားအို တဦးက အော်ပြီး အကူအညီ တောင်းပေမယ့် ဘယ်သူမှ ပေါ်မလာဘဲ မိခင်ပေါ်လာမှ သူ့သမီးကို ချီသွားပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုးတွေဆိုတာ ကွန်ဖြူးရှပ် အတွေးအခေါ် လွှမ်းမိုးတဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ် ၀ါဒအရ ဆိုရင် ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ သူကို ကူညီခြင်း၊ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ် အချင်းချင်းရိုင်းပင်း ကူညီခြင်းဟာ ဒီဝါဒရဲ့ အနှစ်သာရပါ။ ဒါပေမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေး သွေးအိုင်ထဲ လူးလှိမ့်နေတာကို ကယ်မယ့်သူ မရှိ ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အပါအ၀င် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေ၊ ပြည်သူတွေဟာ ဒီနေ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကို သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေ ကမ္ဘာ့ မီဒီယာတွေမှာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။ Yue Yue ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ရုပ်သံမှာ ထုတ်လွှင့်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ် တခုမှာဆိုရင် လူ ၄ ဒသမ ၄ သန်းလောက် ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးသူ အများစုက တရုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှင့်အတူ “Moral Collapse” ကိုယ်ကျင့် တရားဆိုင်ရာ ချွတ်ခြုံကျတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်နေပြီ လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ နာမည်ကြီး သတင်းမဂ္ဂဇင်း Caixin ကတော့ တရုတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုကို ပြစ်တင် ဝေဖန် ထားပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးနေတဲ့ နဂါးကြီးရဲ့ အန္တရာယ်ကို သတိထားကြ
ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိတဲ့ နဂါးကြီး အရှက်ရသွားတဲ့ လစ်ဗျားအရေး
စစ်အေးခေတ် နောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ မိမိနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွား တခုတည်းကိုသာ ကြည့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား မရှိတဲ့ လမ်းစဉ်ကို သုံးလာတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ် ခု လောက် ရှိနေပါပြီ။ လတ်တလော ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လစ်ဗျားအရေးကို ကြည့်ပါ။ ၄၂ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ကဒါဖီကို ပြည်သူတွေ ဖြုတ်ချဖို့ လုပ်နေတဲ့အချိန်၊ ကုလသမဂ္ဂမှ လေယာဉ် မပျံသန်းရဇုန် သတ်မှတ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ တရုတ်က မသိသလိုနဲ့ ကြားနေခဲ့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် နေတိုးက လစ်ဗျား ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်တော့ တရုတ်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပြန်တယ်။
အရေးသာလာတဲ့ လစ်ဗျား အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကောင်စီ NTC ကလည်း အနာဂတ်မှာ တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့အတွက် လစ်ဗျားမှာ နေရာ မရှိဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ လစ်ဗျားမှာ ရေနံ တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မီးရထားလမ်းနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေမှာ ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံဖိုး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားပါတယ်။ ဒီလို မြောက်အာဖရိက နိုင်ငံငယ်လေး တခုက ကမ္ဘာ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံ တခုကို ပြောလိုက်တာဟာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ အရှက်ရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်ရဲ့ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် ၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ရေနံသိုက်ကြီး တခုကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံး လိုက်ရပါတယ်။
တရုတ်ကြီး ဆီးရီးယား အရေးမှာ ၀င်ရှုပ်ပြီ
တူနီးရှားမှ စတင်ခဲ့တဲ့ အာရပ် လူထုအုံကြွမှုဟာ ဆီးရီးယား နိုင်ငံအထိ ပြန့်နှံ့ နေပါတယ်။ အာဏာရှင် အာဆတ်ကို သမ္မတ ရာထူးက ဆင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။ အာဆတ်ကလည်း သူ့ရာထူး တည်မြဲရေးအတွက် လူထုကို အပြတ်ချေမှုန်း နေပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆီးရီးယား နိုင်ငံအတွင်း လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်နေမှုကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချဖို့ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါမှာ တရုတ် နှင့် ရုရှား နှစ်နိုင်ငံတို့က ဗီတိုမဲနှင့် ပယ်ချခဲ့အတွက် အဆို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဆီးရီးယားပြည်သူ့ အသက် ၃၀၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံး လိုက်ရပါပြီ။
တရုတ်နှင့်ရုရှား နိုင်ငံတို့ဟာ လစ်ဗျားအရေးမှာ ကြီးမားသော သင်္ခန်းစာ ရရှိလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုး အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးမှု ရှိလာမှာကို ထိတ်လန့်နေတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတိုမဲကို အသုံးပြုပြီး အာဏာရှင် ဘာရှာအယ်လ်အာဆတ်ကို ကာကွယ်မှု ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား မရှိတဲ့ တရုတ်အစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီများ
မိမိနိုင်ငံ တခုတည်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကြည့်တဲ့ တရုတ်ကြီးဟာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာသာ အရှက်ရစေတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျိုးကြည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကြောင့်လည်း တရုတ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ အရှက်ရစေမှုကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မယ်လမိန်း ဓါတ်သတ္တုပါတဲ့ နို့မှုန့်တွေကို ကမ္ဘာ့တ၀ှမ်း ဖြန့်ချိမှုကြောင့် အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးငယ် ထောင်နှင့် ချီကာ ကျောက်ကပ် ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ် ခြောက်ဦးထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေကို ကြည့်ရင် တရုတ်အစိုးရကသာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား တခုတည်းကို သာကြည့်တာ မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလည်း မိမိ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရေး အတွက် ဆိုပါက လူ့အသက်တွေကို အဓိက မထားဘဲ “ဘယ်သူ သေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော” ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်နေကြပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုဟာ သာမန်ရိုးရိုး ဖြစ်စဉ် မဟုတ်ဘဲ တရုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးမှာ ကိုယ်ကျင့် တရား ချွတ်ခြုံ ကျနေတာကို ပြသလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမမယ် ကလေးတဦး သေလုမျောပါး ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ၇ မိနစ်အတွင်း ဖြတ်သွားတဲ့ လူ ၁၈ ဦးက လျစ်လျူပြု ခဲ့ကြတာဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အခြေအနေ ဖြစ်တယ်လို့ အချို့သော လူမှုစိတ်ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
တရုတ်ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်၊ တွစ်တာ လူမှုဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်တွေ ကနေ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးမှုကို အကြီးအကျယ် ထိုးနှက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၃၀၀ ကျော်ဟာ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ကနေ ၁၈ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အထူး အစည်းအဝေးမှာ တရုတ်ရဲ့ ပျက်စီး ယိုယွင်းနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကို ဆွေးနွေး ခဲ့ဖွယ်ရှိပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေနှင့် တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးမှုက ကျနော်အဖေပြောတဲ့ “ဂေါ်တူကရိတ်” နိုင်ငံလို ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ခြောက်ပုံတပုံ ရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီးရဲ့ ကျဆုံးခန်းကို ဖြစ်စေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တရုတ်အစိုးရ အပါအ၀င် တရုတ် အရင်းရှင် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အဓိက ဆက်ဆံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေ အတွက်တော့ (moral collapse) စိတ်ယဉ်ကျေးမှု ချွတ်ခြုံကျ ဆင်းရဲနေတဲ့ တရုတ်နဂါးကြီးကို အထူး သတိထားစရာလို့ တွေးမိပါတယ်။
တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဆော့ဖ်ပါဝါ ရှာပုံတော်
Sunday, 23 October 2011 11:49 ၀င့်ထန်း
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ကနေ ၁၈ ရက်နေ့အထိ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၃၀၀ ကျော် ပေကျင်းမြို့မှာ အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ အဓိက ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းက တရုတ်ပြည်ရဲ့ 'ယဉ်ကျေးမှု ပါဝါအပျော့' (cultural soft power) ကို မြှင့်တင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖို့ ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တရုတ် စီးပွားရေး တိုးတက်ကြီးထွား လာပေမဲ့၊ လူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီလိုမှု၊ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ချွတ်ခြုံကျမှုတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပေကျင်းမှာ အသက် နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး ကားတိုက်ခံရတဲ့မြင်ကွင်းကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာ အားလုံးက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို အကြင်နာမဲ့စွာ ရှောင်ကွင်းသွားခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံး အမှိုက်ကောက်သူက ဆေးရုံပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့၊ ကလေး သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းစာတွေက ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြပြီး၊ တရုတ် လူထုရဲ့ စိတ်ဓာတ် ချွတ်ခြုံကျမှုကို ပါတီ အစည်းအဝေးမှာ အဓိက ဆွေးနွေးရတဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်လာသည်။
ငွေကြေးနဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုမှလွဲပြီး ဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့ တရုတ်လူထုအတွက် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှုန်းစံတန်ဖိုးတွေ (moral soft power) ပြန်ရှာဖွေ မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ။ ယခု ပါတီ ဗဟိုကော်မတီက အမေရိကန် ပညာရှင် ဂျိုးဇက် အက်စ် နိုင်း (Joseph S. Nye) ပြောတဲ့ ဆော့ဖ်ပါဝါကို တရုတ်မှာ အရေးပေါ် တည်ဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကတည်းက ဂျိုးဇက်နိုင်း က တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ဆော့ဖ်ပါဝါဆိုတဲ့ သံလိုက်ဓာတ်စွမ်းအား အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်မှုက လက်နက် အင်အား၊ ဓနအင်အား ဆိုတဲ့ ပါဝါအမာတွေပေါ်မှာချည်း မတည်။ အခြေခံဥပဒေ ခိုင်ခံ့မှု၊ လူအချင်းချင်း လေးစားတန်ဖိုးထားမှု၊ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် အားကောင်းမှု စတဲ့ ပါဝါ အပျော့တွေနဲ့ ပါဝါအမာတွေ ပေါင်းစပ်မှသာ ပြည်တွင်းအင်အား ကြံခိုင်မှုနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ အထင်ကြီး လေးစားခံရမှု ရမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ပါတီ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေက တရုတ် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန် မြင့်နေပေမဲ့၊ ကျင့်ဝတ်နီတိ ကျဆင်းမှု အပါအ၀င်၊ ဆော့ဖ်ပါဝါ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခဲ့တာကို ၀န်ခံပြောဆိုမှုတွေလည်း လုပ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်ရဲ့ ပင်ကိုယ် ဆော့ဖ်ပါဝါတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲဆိုတာတော့ ယခုမှ ရှာပုံတော်ဖွင့် (soul-searching) ကြရဦးမည် ဖြစ်သည်။
– Saya Gyi Han visits native place
ဒီကနေ့ ဖေါ်ဝပ်မေးလ် နဲ့ရောက်လာတဲ့ စာတစောင် က စိတ်ဝင်စားစရာမို့ မျှဝေချင်တဲ့စိတ် အခြေခံနဲ့ ဒီစာစုကိုရေးပါတယ်။
စာကို ကလစ်ပြီးဖတ်နိုင်သလို တချို့အရေးပါတဲ့အချက်တွေကိုတော့ တတ်သလောက် ဘာသာပြန်ပြီး ရေးလိုက်တယ်။
NCUB – ဥရောပ ကိုယ်စားလှယ် ဦးနွယ်အောင် က သူတက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ Towards Peace and Democracy in Burma, European Parliament, Brussels, 05 October 2010 ကွန်ဖရင့် မှာ အခု ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ Euro-Burma-Office (EBO) က ဦးဟန်ယောင်ဝေ ပြောခဲ့တာတွေ ကဟောသလို ပါဆိုပြီး ဥရောပ ပါလီမန်အဖွဲ့ဆီ လှမ်းရေးထားတဲ့ စာခင်ဗျ။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်
အီးယူပါလီမန်အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေနဲ့တက်လာတဲ့ မြန်မာအစိုးရသစ်နဲ့ လက်တွဲသင့်ကြောင်း
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တွေဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ တသွေမတိမ်း တူပါလျက် ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ လက်ခံခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တော့ ဘာကြောင့် သပိတ်မှောက်ရမှာပါလဲ။
ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကုလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကော်မရှင်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်တော့မယ် ဆိုရင်.. ဦးနေ၀င်းခေတ်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတင်ဦး၊ လက်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး အနေနဲ့ သူ့လက်ထက်၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များဆီက တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖြတ်လေးဖြတ် နဲ့နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း ဦးဟန်ယောင်ဝေ က တင်ပြခဲ့ပါကြောင်း။
ကိုင်း အချုပ်ကတော့ အဲဒါပါဘဲခင်ဗျား။ အတော်တော့ ဟုတ်နေပါပြီ။ ဦးတင်ဦးကို ဖြတ်လေးဖြတ် ဆိုရင်.. ဦးသန်းရွှေ တို့ ..သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး တို့ အပါအ၀င် လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဘာတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာတွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ ချန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါ့မလား..။ ဦးဟန်ယောင်ဝေ ခမြာ..ဒါကိုတော့ ထည့် မပြောဝံ့ရှာဘူးလေ.. ။
ဘယ်ဖြစ်မတုန်း.. ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံခဲ့သူကြီး တယောက်အဖို့ ဦးသန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါများကို သွား ရန်လုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲလေ ။ တလှေထဲစီးသူများပေဘဲ။
NDF ပါတီကို ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေထုတ်ပေးခဲ့သူ ကလဲ ဦးဟန်ယောင်ဝေ ဖြစ်ပါကြောင်း တဲ့ခင်ဗျ ဟိုကသည်ကကြားလာတာလေးကလေ။
အံ့သြောသွားသလားခင်ဗျ.. ကျန်နေပါသေး.. သူလာမယ်ဆိုတာ ကို The Voice ဂျာနယ်က အရင် သိသဗျား။ မဆန်းပါဘူး အဲဒီ ဂျာနယ် ပိုင်ရှင် က ရွေးကောက်ပွဲ ဂုရုကြီးအလုပ်ကောင်းလို့ တပြည်လုံးနီးပါး ချဉ်ဖတ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ဖြစ်သကိုး။
ခုလောက်ဆိုရင် ဘယ်ယုန်မြင်လို့ ဘယ်ချုံထွင်ဖို့ ဆြာကြီးဟန်ယောင်ဝေ ရောက်လာတယ်ဆိုတာ ရိပ်စားမိနိုင်လောက်ရဲ့..။
သူကဘဲ ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းသတဲ့။ ဟိုက သဘောကောင်း၊ သူ့အဖေအတိုင်း ရန်သူကိုတောင် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ဆို အပစ်အနာဖယ်ထားပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရဲတဲ့ အာဂ နိုင်ငံ့သမီးကောင်း။ ပွဲကြီးပွဲကောင်း တော့ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဗျား……။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ် (University of Michigan) ရဲ့ ရာအိုး ဝေါ်လင်ဘတ် (Raoul Wallenberg) ဆုကို ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရရှိစေဖို့ အနစ်နာခံ ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက် အခုလို ချီးမြှင့်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ည အမေရိကန်စံတော်ချိန် ၇ နာရီခွဲမှာ မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗွီဒီယို ရုပ်သံနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်မှာ “လူမှုအသိုက်အ၀န်းထဲက တကယ့် အပြောင်းအလဲကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူသား” အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ဝေါ်လင်ဘတ်ဆုကို ဒီနှစ်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်က လက်ထောက်အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ ဂျွန် ဂေါ့ဒ်ဖရီး (John Godfrey) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားသူတစ်ဦးဖြစ်သလို တကမ္ဘာလုံးကိုလည်း သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ လွှမ်းမိုးစေခဲ့သူမို့ ဒီဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင်မကဘဲ ကမ္ဘာကပါ အသိမှတ်ပြုရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်တဲ့ဆုဟာ လူ့သိက္ခာ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတရေးအတွက် ထူးထူးခြားခြား စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခဲ့သူ ရာအိုး ဝေါ်လင်ဘတ် (Raoul Wallenberg) ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ပေးတဲ့ဆုလို့ဆိုပါတယ်။
“ပေးမယ့်ဆုက ဝေါ်လင်ဘတ်ဆုပါ။ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ထွက် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သိပ်ထင်ရှားတဲ့ ရာအိုး ဝေါ်လင်ဘတ် အထိမ်းအမှတ် ပေးတဲ့ဆုပါ။ သူဟာ ဆွီဒင်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာ ဒီ မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း ဆွီဒင် သံတမန်အဖြစ် အမှုထမ်းနေတဲ့သူ့ကို ဘူတာပက်စ် (Budapest) မြို့က ဂျူးတွေကို ကယ်တင်ဖို့ အမေရိကန်က အကူအညီတောင်းတာကို လက်ခံပြီး သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ဂျူးတွေကို ကယ်တင်ခဲ့သူပါ။ လူ့သိက္ခာ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတရေးအတွက် ထူးထူးခြားခြား စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံတဲ့သူတွေကို ရွေးချယ်ပေးတဲ့ဆုကို ဒီနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပေးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။”
အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် အင်္ဂါနေ့ အမေရိကန်စံတော်ချိန် ညနေ ၇နာရီခွဲမှာ မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ် ရက်ဟမ် (Rackham) ခန်းမထဲမှာ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားနဲ့အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောပွဲကို ကျင်းပမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီ မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲ တချို့ တွေ့နေရတာကို ငြင်းချက်ထုတ်စရာမရှိပေမဲ့ ဒီဖြစ်ထွန်းမှုအများစုဟာ ယာယီအဆင့်မှာပဲ ရှိနေသေးတာကြောင့် အနှစ်သာရရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေရှိနေပြီလို့ ပြောဖို့ အချိန်မတန်သေး​ကြောင်း အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Kurt Campbell က ဒီကနေ့မှာပဲ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်က အစဉ်တစိုက် ပြောလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း သူက ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဘန်ကောက်ကနေ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Kurt Campbellက မြန်မာအစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ အတည်ပြုခဲ့တာ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတချို့လွှတ်ပေးခဲ့တာ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဖျားခံရာ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း ဆိုင်းငံ့ခဲ့တာအပါအဝင် ဖြစ်ထွန်းမှုတွေတွေ့ရလို့ အားတက်မိတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
လွှတ်တော်တွေထဲမှာ အချေအတင်ဆွေးနွေးတာတွေ စတင်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ရှေ့ရှုတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးတော့
နိုင်ငံအတွင်း ဒိထက်မက အပြုသဘောဆောင်တဲ့အလားအလာတွေ မျှော်မှန်းလို့ ရပြီဆိုတဲ့သဘောပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီ မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြုသဘောအဆောင်ဆုံး ဖြစ်ထွန်းမှုတချို့ကို တွေ့နေရတယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ထွန်းမှုအများစုဟာ ယာယီအဆင့်မှာပဲ ရှိနေသေးတာကြောင့် အနှစ်သာရရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာပြီလို့တော့ ပြောဖို့ စောသေးတယ်၊ အချိန်မတန်သေးဘူးလို့ ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဒိထက်မက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကို ထပ်ပြီး လွှတ်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊
အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်း ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်ရရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုရေး တွေ ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်း Kurt Campbellက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား နျူကလီယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ လက်နက်အရောင်းအဝယ် စတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ သူတွေ့ဆုံစဉ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဗီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း သူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်လို့
ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကို တကယ်ပဲ လိုက်နာမလား ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်သွားမလဲဆိုတာကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြသွားတာပါ။
အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell ဟာ အာရှနဲ့ပစိပိတ်ဒေသ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထိပ်သီးညီလာခံနဲ့ အာဆီယံ-အမေရိကန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အကြိုညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ အင်ဒိုနီးရှား ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ဂျာကာတာမြို့တော်ရောက်ရှိနေစဉ် ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ၂ ရက်ကြာခရီး ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် မူဝါဒရေးရာညျှိနှိုင်းရေးမှူး Derek Mitchell ဟာ မနေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကိုလွှတ်ပေးရေး၊ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အင်အားသုံးနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကို အဆုံးသတ်ရေးစတဲ့ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတာတွေကို ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြဖို့ ရှိတယ်လို့ အမေရိကန်သံရုံးက VOA ကိုပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီနေ့ နာရီအတန်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုသူ NLD အဖွဲ့ဝင်တဦးက အတည်ပြုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မစ္စတာ Derek Mitchell ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဘန်ကောက်ကနေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ၀ိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက အပြည့်အစုံ တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူ ဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့် သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ပါ ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက် သူ့အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး မကြာခဏဆိုသလို မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက ဗွီအိုအေကို ပြောပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခု သူ့ရဲ့ ၂ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်း မနေ့တုန်းက နေပြည်တော်ကို ခရီးရောက်မဆိုက် သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell အနေနဲ့ မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါတိုင်းလိုလိုမှာ ဒီအခြအနေ အချိန်အခါကောင်းကို အသုံးချပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးလွှတ်ပေးရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ နျူကလီယား မပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်တွေကို လိုက်နာရေး၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေကို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်နေတာတွေ အဆုံးသတ်ရေး စတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အဓိက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေရတဲ့အချက်တွေကို ဆွေးနွေးပြောဆိုမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း အမေရိကန်သံရုံး ပြောခွင့်ရသူက ဗွီအိုအေကို ပြောပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell ဟာ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရန်ကုန်၊ ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံရဲ့နေအိမ်မှာ နာရီအတန်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တဦးက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ သြဂတ်စ်လအတွင်းမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာအလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့လည်း ၂ ကြိမ်တိုင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ အများပြည်သူအကျိုးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြ၀င်မယ်လို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနှစ်သာရရှိတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အဆင့်မှာ ရှိနေပေမဲ့လို့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ မြန်မာအစိုးရက အင်အားသုံး နှိပ်ကွပ်နေတာ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်လို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁,၈၀၀ ကျော် ကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဘ၀င်မကျဘဲ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell မြန်မာနိုင်ငံကို တခေါက် အရောက်ပြန်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေက သုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။
ထွန်းထွန်း | အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၃၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တိုင်းပြည် တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက် မီဒီယာအား ကိရိယာတခုအနေဖြင့် အသုံးပြု ၍ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား ဆက်လက် ဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု Burma VJ အဖွဲ့က ပြောဆိုသည်။
အဖွဲ့အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေသည့် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်တခုဖြစ်သည့် Facebook
သို့သော် DVB သတင်းဌာနတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခန့် ငွေကွာဟမှု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းတွင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက် Burma VJ အဖွဲ့ဝင်များ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။
VJ အဖွဲ့၏ ရပ်တည်ချက်၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၊ အဖွဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သီးသန့် မီဒီယာ ထောင်လာနိုင်ခြေ ရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ကိုအောင်ကြီးအား မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ထွန်းထွန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားသည်။
ပဲ။ ကျနော်တို့ အဓိက က နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာ။ ကျနော်တို့က မီဒီယာကို နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Tool တခုအနေနဲ့ အသုံးချပြီးတော့ လုပ်တဲ့သဘောပဲ။ ကျနော်တို့ အားလုံးက မီဒီယာသမားသက်သက် မဟုတ်ဘူး။ တဖက်အခြမ်းမှာ ကျနော်တို့က Activist တွေ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် Burma VJ စပြီးတော့ တည်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဘက်က လူတွေကော၊ အထဲက လူတွေကောက၊ Burma VJ အဖွဲ့ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ထောင်ထွက်တွေချည်းပဲ။ အရင်တုန်းက နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေချည်းပဲ”
“ကျနော် အဓိက ပြောချင်တာကတော့ Burma VJ ဆိုတဲ့ တချို့မီဒီယာတွေမှာ ပြောနေတာ Burma VJ ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ တကယ်မရှိဘူး၊ အဖွဲ့ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ တကယ် ဒါက ပြည်သူတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ဟာချည်း ကတော့ ကျနော် ပါခဲ့တဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ ပြောရရင် အဲဒါက မမှန်ဘူးလေ။ ဒါကတော့ ကာယကံရှင်တွေ
“အဲဒီတုန်းလည်း ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကို ဟိုးအရင်တုန်း ကလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာလည်း နိုင်ငံတကာကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စကို သိအောင် ဆက်ပြီး
တော့ လုပ်နေတုန်းပဲ။ အဓိက ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာကို Burma VJ ကားထဲကလို အပိတ်ခံထား ရတဲ့ တိုင်းပြည် တပြည် ကနေပြီးတော့ သတင်းတွေ အကုန်လုံးကို နိုင်ငံတကာကို သိအောင် တတ်နိုင်သလောက်
“ကျနော် အဲဒီအရေအတွက်ကတော့ ပြောဖို့ မလိုဘူး ထင်တယ်။ အဓိက ကျနော်တို့ Burma VJ နာမည် အနေနဲ့ ဆက်သွားနေတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ ဆက်ပြီး ရပ်တည်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ကျနော်တို့ အထဲက ရိုက်နေတဲ့ အရုပ်
တွေပေါ့နော်။ အထဲက ကျနော်တို့ အဖွဲ့တွေက ဆက်ပြီးတော့ ရိုက်နေတယ်။ လုံခြုံရေးအရ ကျနော် အရေအတွက် ကိုလည်း မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ ရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ Activities တွေ ဆက်ရှိတယ် ဆိုတာ သိချင်တယ်ဆိုရင် Face Book မှာလည်း တက်ကြည့်လို့ရတယ်။ Burma VJ Media Network ဆိုပြီး
တော့ နေ့စဉ် မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုသတင်းတွေ တောက်လျောက် တင်နေတာပေါ့နော်”
“ကျနော်တို့ ဆက်လုပ်နေတာတော့ အထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သတင်းတွေပေါ့နော်။ အထူးသဖြင့် ဗီဒီယိုနဲ့ ဓာတ်ပုံ သတင်း
တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရအောင် အရင်တုန်းကလိုဘဲ ဆက်ပြီးတော့ ယူနေတယ်။ ယူနေပြီးတော့ တခြား လိုချင်တဲ့ မီဒီယာတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ပေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာလည်း တင်တယ်။ ကျနော်တို့လည်း ပြောထားတယ်လေ။ ကျနော်တို့စီက လိုချင်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ အကုန်လုံးကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် သုံးလို့ရတယ်။ ကျနော်တို့ နာမည်ကိုပဲ Credit ပေးပြီးတော့ သုံးလို့ရတယ်။ အလကားသုံးလို့ ရတယ် ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ Facebook မှာ ကြည့်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်”
“ကျနော်တို့ ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲကတော့ အရင်ကထက်စာရင်တော့ အများကြီးတော့ ရှိသွားတာ တော့ အမှန်ပဲလေ။ အရင်ကလောက် ကျနော်တို့ ငွေမသုံးနိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ တတ်နိုင် သလောက်ပေါ့ဗျာ။ လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ ဆက်ပြီး လုပ်နေတာပဲ”
“စိတ်ကူးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ကျနော်တို့ သွားဖို့ အတွက်တော့ အများကြီးတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိတာပေါ့။ အဲဒါတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကျော်လွှားနိုင်အောင်တော့ လုပ်နေတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က လွတ်လပ်တဲ့ သတင်း အေဂျင်စီတခု အနေနဲ့ သွားဖို့ ဆိုတဲ့ဟာမျိုး စိတ်ကူးတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကိုတော့ ကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ငွေရေးကြေးရေး အပိုင်းကော၊ အခြား နည်းပညာ အပိုင်း
ကော၊ လူအင်အားအပိုင်းကော အကုန်လုံးကို ဖြည့်ဆည်းပြီးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ပေါ် မူတည်တာပေါ့နော်”
“လောလောဆယ်ကတော့ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းအခြေစိုက်အနေနဲ့ကတော့ မရှိပါဘူး။ မရှိပါဘူးဆိုတာက ကျနော် တို့က အရင်တုန်းက DVB နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ သတင်းတွေ အပြင်ကို ပို့မယ်၊ အပြင်ကနေပြီးတော့မှ
“အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့သလိုပဲ ဆက်ပြီးတော့လည်း တတ်နိုင်သလောက် အထဲမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ နော်။ ကျနော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကလည်း ကြိုးစားပေးနေတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း တတ်နိုင် သလောက် ကျနော်တို့ လုပ်နေတဲ့ဟာကို၊ မြန်မာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကို နိုင်ငံတကာ သိအောင် ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းကို ရှာပြီးတော့ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်”
နမူနာ BY AAPP & DVB
ပွဲဆူလွန်းတဲ့ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော် နောက်ဆက်တွဲများ
Tuesday, October 25, 2011 Khet Htan
တနင်္သာရီ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော် (ဓာတ်ပုံ - အားကစားဝန်ကြီးဌာန)
(ကော့သောင်းမြို့မှ ပေးပို့တာ ဖြစ်ပါတယ်)
တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော်ကတော့ အခုတလော အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရော၊ RFA, VOA စတဲ့ အသံလွှင့်ဌာနတွေရဲ့ သတင်းတွေမှာပါ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၄ ခု၊ ဝန်ကြီးချူပ် ၁၄ ဦး ရှိတဲ့အထဲက ဘာဖြစ်လို့များ သူ့တယောက်ထဲ ပဲ့ထွက်ပြီး နာမည်ကြီးနေသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
ထားဝယ်မှာလည်း ရွှေဝယ်သီရိ အားကစားကွင်းတွေ၊ အ.ထ.က (၂) အနောက်က ဘောလုံးကွင်းပါမကျန် လက်ညိုးထိုးရောင်း စားမလို့ ကြံစည်ပါတယ်။ ထားဝယ်သားတွေက မခံနိုင်တော့တာနဲ့ ညဘက်ကြီး သူ့အိမ်ရှေ့ကနေ အော်လံနဲ့လာပြီး အော်ဆဲ ကလော်တုတ်သွားတာ ခံရပါသတဲ့။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ထားဝယ် မြို့တော်ခမ်းမနံဘေးက အစိုးရဧည့်ရိပ်သာကိုတော့ တလ (ဆယ်သိန်း) နဲ့ ငှားစားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ မောင်းမကန်သွား လမ်းက (Viewpoint) နံဘေး မြေကွက်ကိုလည်း သူ့နာမည်နဲ့ ယူထားသည်။ တိုင်း အားကာက သက်သာဆိုင်ခန်းမှာလည်း ၁ ခန်း ဝင်ယူထားပါသေးတယ်။ မြိတ်နဲ့ ကော့သောင်းမှာလည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအဆင့်ဆင့်ကို မြေကွက်တွေ ရှာဖွေခိုင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လစဉ်ကြေးကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့အတွက်သူ အရမ်းသိတတ်တဲ့ (ပြည်နယ်) ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်၊ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူစဉ်ကတည်းက ဒီနေ့အထိ တနင်္သာရီတိုင်းအတွက် ဘာတွေများ လုပ်ပေးခဲ့ပါသလဲ။ သူဌေးတွေဆီက အလှူခံပြီး ရန်ကုန်က စာအုပ်အဟောင်းတွေ၊ အစုတ်အပြတ် မှိုတက်တွေဝယ်ပြီး မြို့နယ်တွေကိုခွဲပေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးလို့ ခေါင်းစဉ်တပ် ဟန်ရေးပြတာကလွဲပြီး ဘာတစ်ခုမှမလုပ် ခဲ့ပါဘူး။
ထားဝယ်မှာလည်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကြီးကို ထိုင်ကြည့်ပြီး ဒေသထွက်မီးသွေးလေး အားကိုးချက်ပြုတ် စားသောက်နေကြရတဲ့အထဲ ထားဝယ်က တရုတ်သူဌေး ဦးစွန်ဝိုင်ရဲ့သား မောင်ဇော်ကို တခြားအမည်နဲ့ မီးသွေး တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ် ပေးလိုက်လို့ အခုမီးသွေးတအိတ် ၄၅၀ဝ ကျပ် ဖြစ်နေပါပြီ။ သစ်တောရှားပါးတဲ့ မြိတ်မှာ မီးသွေးတစ်အိတ် ၁၈၀ဝ ကျပ်နဲ့ ကော့သောင်းလို နယ်စပ်ဒေသမှာတောင် တစ်အိတ် ၂၅၀ဝ ကျပ်ပဲ ပေါက်နေတာ။ ထားဝယ်မီးသွေးဈေးက ၄၅၀ဝ ကျပ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
တလောကလည်း ထားဝယ်နဲ့ကော့သောင်း ဆန်ဈေးကွက်ကို အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီ (မန္တလေး) ကို ပေးလိုက်လို့ ဆန်ဈေးကြီးမြင့်မှုဒဏ် ခံစားခဲ့ကြရပြီးပါပြီ။ တိုင်းအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုလည်း မအေနှမ ကလော်ဆဲ၊ တစ်တစ်ခွခွပြောပြီး ပြဿနာရှာလွန်းလို့ နောက်ကွယ်မှာ ဦးကျောက်လုံးလို့ ခေါ်နေကြပါသတဲ့။
အခုလည်း သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းထူးတခု ထပ်ထွက်လာပြန်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော်ရဲ့သတင်းပဲပေါ့။ တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဟာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခင်ဇော်ကို ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ အခု အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်က မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့(၁) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ ၇၀ဝ ဦးက တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်၊ ယခုဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော်ကို အယုံအကြည်မရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းပေးပါရန်၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ (နေပြည်တော်) ဆီကို (၁၈.၁၀.၂၀၁၁) ရက်နေ့မှာ ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
၄င်းအပြင် မြိတ်မြို့ သစ်ရာဝရွာမှ ၄င်းတို့ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ဒေသအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိတဲ့အတွက် လူပေါင်း ၇၀ဝ ကျော်ကပဲ လတ်မှတ်ထိုးပြီး မဲရုပ်သိမ်းမည့်အချိန်တွင် တိုင်းလုံခြုံစီမံဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်လွင်အား တာဝန်ပေးပြီး ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တလခန့်ကလည်း တနင်္သာရီတိုင်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၈ ဦးက ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော်ကို အရေးယူပေးဖို့ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ထံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့စဉ်က “ပြင်းထန်စွာသတိပေးခြင်း” ဆိုတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကိုသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတများ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများဟာ အခုလို သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေက ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များနဲ့အညီ တင်ပြမှုအပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီး ကိုင်တွယ်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာတော့ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေကြောင်းပါခင်ဗျား။
ဆက်စပ်သော သတင်းများ ပြန်ဖတ်လိုလျှင် -
-တနင်္သာရီတိုင်း ဆန်တင်ပို့မှု ကုမ္ပဏီ ၂ ခု လက်ဝါးကြီးအုပ်ခွင့်ရ
- တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ထိန်းချုပ်၍ တနင်္သာရီတွင် ဆန်ဈေး တက်
- တနင်္သာရီ ၀န်ကြီးချုပ် ပြင်းထန်စွာ သတိပေးခံရ
By featured, ဧရာဝတီ on October 25, 2011 5:39 pm
အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ မရုပ်သိမ်းမီ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အပြောင်းအလဲ များစွာလုပ်ရန်လိုသေးကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က The Wall Street Journal သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့ထုတ် အဆိုပါ သတင်းစာတွင် ပါရှိသည့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းထောက် ဆီလင်း ဖာနန်ဒတ်ဇ်အား မြန်မာပြည်အပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းရန် စောသေးသည်ဟု ပြောရသည့် အချက်နှစ်ချက် ရှိကြောင်း ပြောသည်။
ပထမတချက်မှာ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအချက်မှာ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများကို ရှင်းလင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုနှစ်ချက်ကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးသရွေ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရန် အချိန်မကျ သေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အစိုးရ၏ အပြောင်းအလဲများအပေါ် သံသယကြီးလွန်းသော အတိုက်အခံများအားလည်း နားလည်မှု ရရှိစေရန် စည်းရုံးထိန်းကွပ်နေရကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရှေ့မှောက်တွင် တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ၎င်းကို အသုံးချနေသည်ဟု တချို့သော အတိုက်အခံများက စွပ်စွဲပြောဆိုကြကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများဖြင့် အနိုင်ရယူခဲ့သည့် အစိုးရကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာချိန်တွင် အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်ဟု အတိုက်အခံတချို့က မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းအနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယခု အစိုးရသစ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများသည် ယခင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် မတူဘဲ ဟန်ဆောင် ပြောဆိုနေခြင်း မဟုတ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခံစားရကြောင်း The Wall Street သတင်းထောက်ကို ပြောသည်။
“အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ သူတို့ တကယ့်ကို ပြောနေကြတာလို့ ခံစားရတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဆိုသည်။
လက်ရှိ အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်လိုသော ဆန္ဒများသည် မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာမိသားစုများ အတွင်း သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ရန် အခွင့်ကောင်းတရပ် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရ၏ မီဒီယာထိန်းချုပ်မှုများ လျှော့ချပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ စတင် လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ ၎င်းနှင့် ဆွေးနွေး စကား ပြောဆိုခြင်း စသည်တို့ကို အပြည့်အဝ ကြိုဆိုသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
ဦးသိန်းစိန်အပါအဝင် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ လတ်တလော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်ကာလများက အသားအရောင်ခွဲခြားမှု စနစ်ကို ရပ်စဲရန် တောင်အာဖရိကတွင် နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းကြခြင်းနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူကြောင်း သူက ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ရိုးသားပွင့်လင်းပုံရ၍ နိုင်ငံအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိပုံရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
“ကျမတို့ ပန်းတိုင်ကို မရောက်သေးပေမယ့် အဲဒီပန်းတိုင်ဆီကို ဦးတည်သွားနေကြတယ် ဆိုတာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် လာမည့် ၂၀၁၅ တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များမှာ အစိုးရပေါ်တွင် မူတည်နေသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
NLD မှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး စနစ်ကို တနည်းတဖုံ ထောက်ခံရာရောက်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာအစိုးရက ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုလားနေခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို NLD က သပိတ်မှောက်ခဲ့ခြင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ထောင်ကျဖူးသူများကို ပါတီနိုင်ငံရေးထဲတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ကန့်သတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေများကို ကျင်းပနေသည့် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ထွက်ပေါ်လာမည့် ရလဒ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ စဉ်းစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူက ဆိုသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ် NLD က ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “လူတော်တော်များများ ထင်သလို ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတိုင်း အာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ လက်တွေ့လည်း မကျဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တော်တော်များများဟာ ကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီ၊ တချို့လည်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ရောက်နေကြပြီ” ဟုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းပြသည်။
အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအနက် မီဒီယာလောကကို ချုပ်ချယ်မှု လျှော့ချလာခြင်းအား ထောက်ပြ၍ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အရဆုံးကာလဟု မှတ်ချက်ချပြီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
“လူတွေဟာ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လာဖို့ ပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာ ရှိလာတယ်။ အရင်ကလို မကြောက်ကြတော့ဘူး။ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေ အနေနဲ့လည်း အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက် လာနိုင်နေပြီ” ဟု သူက ဆိုသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရယူရေး ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍မူ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောဆိုလိုခြင်း မရှိကြောင်း သတင်းစာတွင် ရေးထားသည်။
“အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို မျှော်မှန်းနေတာဟာ ပြည်သူလူထုဘဝ တိုးတက်လာဖို့ ကိစ္စနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ မြင်တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရကမူ လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို လက်ခံရယူရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။
တချိန်တည်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို ဝေဖန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။
မြန်မာပြည်တရားစီရင်ရေး စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ “အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ” ဟု ပြောပြီး လွတ်လပ်မျှတမှု မရှိသော တရားစီရင်ရေးစနစ် ဖြစ်သည် ဟုလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
မီဒီယာတင်းကျပ်မှုများကို လျှော့ချပေးနေသော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကင်းမဲ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
ဥပမာ တခုအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေသည် ယခုတိုင် အစိုးရကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေဆဲလော (သို့မဟုတ်) အမှန်တကယ် အငြိမ်းစားယူသွားခြင်းလော ဆိုသည့်အချက်ကို မရှင်းလင်းကြောင်း၊ ထိုသို့ မရှင်းလင်းရခြင်းမှာလည်း လူအများမှာ ကောလာဟလများကိုသာ အားကိုးနေရဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
သို့သော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် တစုံတရာသော သြဇာအာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ထိုသြဇာအာဏာကို အသုံးချကာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများကို လုပ်ကိုင်သွားနိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“လူတွေမှာ မေးစရာမေးခွန်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျမထင်တယ်။ အဲဒါကတော့ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာကော၊ စစ်တပ်ထဲမှာပါ ဦးသိန်းစိန်ကို ဘယ်လောက် ထောက်ခံကြသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒီမေးခွန်းတွေ ရှိနေတာကို ကျမလည်း မငြင်းနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အတိအကျ ခံစားယုံကြည်မိတာကတော့ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ အလုံးစုံကို မချုပ်ကိုင်နိုင်ရင်တောင်မှ သူဟာ ထိပ်ဆုံးကလူပဲ ဆိုတာပါ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကောက်ချက်ချသည်။
တိုင်းရင်းသား လူငယ်နှစ်ဦး ကနေဒါ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ
ကနေဒါနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား လူငယ် ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိူးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကနေဒါ အစိုးရ အပါအ၀င် လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံ တင်ပြနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ် တက်လာပေမဲ့ အထွေထွေ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တွေက တိုးတက် ပြောင်းလဲမှု မရှိသေးတဲ့ အပြင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းနဲ့ ကရင်ဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အများအပြား တိုးပွားလာနေကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အများအပြား ထောင်တွေထဲမှာ ရှိနေသေးတာကြောင့် ပြောင်းလဲနေပြီလို့ အပြော မစောဖို့ ကနေဒါ အစိုးရကို တင်ပြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ အင်အားစု အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ကိုအောင်နိုင်စိုး က ပြောပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ ကိုအောင်နိုင်စိုးနဲ့အတူ မွန်လူငယ်တိုးတက်ရေးအဖွဲ့က မိအိုက်စွန်းလည်း ပါဝင် ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့က မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Parliamentary Friends of Burma (PFOB) ဥက္ကဋ္ဌ ကနေဒါ လွှတ်တော်အမတ် Jim Jerygennis အပါအ၀င် လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့မှာ ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ကနေဒါ အခြေစိုက် NGO အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ကနေဒါ မိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ CFOB/ CUPE နဲ့ CUSO-VSO သုံးဖွဲ့ ပူးပေါင်း စီစဉ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၃၉) ဦးကို ဇာဂနာ ထောင်ဝင်စာလိုက်တွေ့
နိုင်ငံကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာဟာ ပြည်မြို့ ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သာယာဝတီ၊ ပေါင်းတည် နဲ့ ပြည် အကျဉ်းထောင် (၃) ခုကို မနေ့တုန်းက သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ငွေကြေးနဲ့ အစားအသောက် ပစ္စည်းတချို့ ဝေငှ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Zaganar Photos Album
ဟာသ သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဇာဂနာနှင့် အဖွဲ့က သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား (၃၄) ဦးအတွက် လှူဒါန်းသည့် ကျပ်ငွေ ၃ သိန်း ၄ သောင်းနှင့် အလှူပစ္စည်းများကို သာယာဝတီ ထောင်ပိုင်ကြီးက လက်ခံ ရယူနေစဉ်။ Zaganar Photos Album
သာယာဝတီထောင်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား (၃၄) ဦး ပေါင်းတည် ထောင်က(၁) ဦးနဲ့ ပြည်ထောင်က (၄) ဦး စုစုပေါင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား (၃၉) ဦးကို တစ်ယောက် ကျပ်ငွေ (၁) သောင်းနှုန်း ကူညီနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကိုဇာဂနာက ပြောပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ အကျဉ်းကျ နေသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေသာ လူကိုယ်တိုင် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ရနိုင်တာကြောင့် သူ့အနေနဲ့ လူကိုယ်တိုင် အားပေးခွင့် မရခဲ့ပေမယ့် ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ငွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကိုဇာဂနာက ပြောပါတယ်။ “သာယာဝတီထောင်က ထောင်ပိုင်ကြီးက တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၄ ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ယောက် တစ်သောင်းဆိုတော့ သုံးသိန်းနဲ့ လေးသောင်း ပေးနိုင်တယ်။ ရတဲ့လူတွေကလည်း ရကြောင်း လက်မှတ် ထိုးကြတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့တွေက ချက်ချင်းပဲ သူတို့ဆီက အဖြေကို ပြန်ရခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်းတည် သွားတယ်၊ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုကျော်ကျော်လင်း ဆိုတာ တစ်ဦးပဲ ရှိတယ်။ နောက် ပြည်မှာ ထောင်ပိုင်က သူကိုယ်တိုင်ပဲ ကျနော်တို့ကို လက်ခံပေးတယ်။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လေးဦး ရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် ငွေနဲ့ စာအုပ်တွေ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။” အကျဉ်းထောင်တွင်းမှာ `ဈေးဘား’ လို့ခေါ်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ကိုယ် ဝယ်ယူ စားသောက်နိုင်ဖို့ အပြင်ဘက်က မိသားစုဝင်နဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ငွေပေးသွင်းခွင့် ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဇာဂနာနဲ့အဖွဲ့ဟာ အကျဉ်းထောင်တွေကို လိုက်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လိုက်လံ ထောက်ပံ့နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ရက်ပိုင်းတွေ အတွင်းမှာတော့ အနုပညာသည်တွေ ပါဝင်မယ့် ကိုဇာဂနာနဲ့ အဖွဲ့ဟာ နေ့ချင်းပြန် သွားရောက်နိုင်မယ့် ပုသိမ် ၊ ဘားအံ စတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကို ထပ်မံ သွားရောက်ဖို့ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ အကျဉ်းထောင် သုံးခုက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဇာဂနာကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။
Burmese youth leaders seeking release of political...
ကားတွေမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာ ယွီယွီလေး အေးချမ်...
ပွဲဆူလွန်းတဲ့ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော် နောက်ဆ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၃၉) ဦးကို ဇာဂနာ ထောင်ဝင်စာလု...